Kuzvarwa Patsva
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Kuzvarwa Patsva
Jesu akaporesa bofu nekutanga kumupa kuratidzwa kunova maonero emweya.
Marko 8:24 Iye akatarira akati: ndinovona vanhu; ndinovavona vachifamba vakafanana nemiti.
Muti mucherechedzo wemweya wemunhu.
Chinhu chararama kwenguva refu panyika muti webristlecone wekuAmerica unonzi wava nemakore anosvika zviuru zvina zvine mazana mashanu. Izvi zvinodzokera kunosvika pamakore eMvura yaNoa. Saka Muti weHupenyu mumunda weEdeni waive Mweya waKristu. Muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa waive mweya waSatani. Vakapfigirwa muhondo yemakore zviuru zvitanhatu vachirwira kutonga hupenyu nendangariro dzevanhu. Nhasi vari kurwira kutonga ndangariro dzako iwe neni.
Hupenyu hunovimba nevhu kuti huvepo. Mwari akaisa Adamu nemwenga wake Eva mumunda weEdeni.
Bhaibheri rinofananidza mweya wemunhu wemukati kana moyo nemunda.
Jeremia 31:12 ... mweya wavo uchava somunda wakadiridzwa; ...
Hatifaniri kukanganwa kuti zvipukanana zviduku-duku zvinoonekwa sezvisina maturo zvakaita sehutachiwana, manyongorosi, masvosve majuru nezvimwe zvakadaro zvinogadzirisa ivhu zvotendera kuti hupenyu hurarame muvhu. Zvipuka zvinozvininipisa izvi kazhinji zvinotarisirwa pasi zvichifuratirwa patinotarisa nekupedzera simba pazvinhu zvinoonekwa zvakanaka zvakaita semiti nemaruva akanaka. Asi tinokanganwa kuti zvirimwa nemiti zvinoyevedza zvese zvinorarama nekuda kwezvipuka zvinotarisirwa pasi izvi zvinoita basa rekunatsa ivhu.
Jesu akapa zviuru zvevanhu zvekudya kaviri kubva pachikafu chishoma-shoma. Tinozviona izvozvo semunana mukuru, chokwadi waive munana. Asi Jesu pachake akazoisa kukosha kukuru pamafufu aive asaririra aive arambwa nevazhinji ava.
Kupa vanhu vechiJuda zvekudya chaive chiratidzo chekudzidzisa dzidziso. Asi maJuda aizoramba dzidziso dzaKristu vomurasa iye neEvangeri rake. Evangeri rakarambwa nemaJuda paCalvari raizonongwa nemapoka maviri evanhu. Pekutanga, kereke yevaHedeni mukati menguva nomwe dzemakereke. Zvino Evangeri rimwechete iroro raizotendeukira kumaJuda zvakare mukati menguva yeKutambudzika kukuru kuti rinogamuchirwa nemaJuda 144000 kubva mumarudzi gumi nemaviri aIsraeri. Ndicho chikonzero nei Tabernakeri yaMosesi yaive nechigadziko chemwenje minomwe kuitira chiedza uye zvingwa gumi nezviviri zvekuratidzira.
Kristu ndiye Musoro wekereke (kwete pasita) muviri wakabatanidzwa nemusoro nebhonzo remusana. Mabhonzo manomwe ekutanga evhetebhuri anobva pamutsipa. Mamwe gumi nemaviri anokatana nembabvu dzinochengetedza moyo nemapapu. Saka zviverengo izvi chechinomwe nechegumi nembiri ndizvo zvinobatanidza Musoro neMuviri waKristu.
Ichi ndicho chikonzero nei tichifanira kuzvarwa patsva. Chokwadi chakadzama cheBhaibheri hachisi pachena saka chinorambwa chichinzi hachina maturo kana kuti hachina kukosha kana kuti chinorwisa mamwe Magwaro akanyorwa. Saka chinofuratirwa uye kuraswa, semarara anoraswa nevazhinji.
Mateo 16:9 Hamunzwisisi nazvino here, kana kurangarira zvingwa zvishanu zvevanhu vane zvuru zvishanu, namatengu amakawana kuti aiva mangani?
Jesu aitarisira kuti vadzidzi vake vanzwisise mucherechedzo wechikafu chakaraswa chaimiririra dzidziso dzeBhaibheri dzaive dzichifuratirwa. Chokwadi chakakosha uye chinofanira kutsvagwa. KuKimberley vakabvisa ivhu renyika rinokwana matani mamiriyoni manomwe kuti vawane miriyoni rimwechete remabwe anokosha emadhaimani. Zvinotora basa rakaoma zhinji kwazvo kuti muwane mabwe echokwadi.
Mateo 16:10 Kana zvingwa zvinomwe zvavanhu vane zvuru zvina namatengu amakawana kuti aive mangani?
Jesu akaita munana uyu kaviri kuti aratidze kuti mapoka maviri chete ndiwo achabata dzidziso yeruponeso yairambwa nemaJuda nguva iyoyo. Vadzidzi chete ndivo vakaudzwa kuti vanonge mafufu aive asaririra. Ivo vega ndivo vaizoziva kuti zvese zvaive pamusoro pei. Tinogamuchira chikafu chedu, Evangeri rakarambwa nemaJuda, kubva kuvadzidzi vaJesu vakanyora Testamente Itsva.
Mateo 16:11 Hamunzwisisi neiko kuti handina kutaura kwamuri pamusoro pezvingwa? Asi muchenjere mbiriso yavaFarise navaSaduse.
12 Zvino vakanzwisisa kuti havana kunzi vachenjere mbiriso yezvingwa, asi dzidziso yavaFarise navaSaduse.
Jesu aitarisira kuti vadzidzi vake vanzwisise zvakadzama zvaaitaura.
Kana chokwadi chaziviswa, anenge otarisira kuti tizive chokwadi.
Zvinoonekwa nevanhu mumakereke sezvinhu zvisina maturo (zvinhu zvakareruka, zvinotarisirwa pasi zvekuti matengu emafufu akaraswa aive mangani) zvakatobata kiyi yezaruriro yakadzama yekufambira mberi kweEvangeri kwenguva inouya.
Ndangariro dzakareruka dzinofadzwa zviri nyore nezvinhu zvikuru. Ndangariro dzakanaka dzinofadzwa nezvinhu zviri nyore uye zvinotarisirwa pasi.
Johane 3:3 Jesu akapindura, akati kwavari: zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwauri: kana munhu asingaberekwi kutsva, haangavoni hushe bwaMwari.
Kana “tikaona” zviri kutaurwa naJesu, ndipo patinotanga kunzwisisa.
Saka kana tisina kuzvarwa patsva pachokwadi Bhaibheri richange riri Bhuku rakavharwa munzvimbo zhinji uye hatizozivi zvinenge zvichitaurwa neMagwaro. Saka maKristu nehumbwende vanoti Bhaibheri rakakanganiswa uye rinozvirwisa. Vanoti Bhaibheri rine mavhesi akawanda asina maturo uye asina kufanira uye kuti Zvitsauko zvishoma zvekutanga zvaGenesisi zvingori fungidziro hazvina maturo. Vanoti Bhaibheri rinofanira kunyorwa patsva uye kugadziriswa richibviswa micherechedzo isina maturo uye zvakanangana nehunhu hwevanhu zvinoita sezvakaoma kutevera nekuti kodzero dzevanhu uye zvepabonde mazuva ano zvinovatendera kuita zvavanoda saka vanoda kuti nesuwo tiite izvozvo.
Mifungo yakaipa iyi yese yakavakwa nevanhu vasina kuzvarwa patsva vari kuedza kufukunyura zvakavanzika zveMagwaro kupfurikidza ruzivo rwavo rwevanhu vachikundikana. (rega titi ruzivo rwavo rwevanhu rwakarasika).
Nei Mwari akatambira ropa remhuka rakadeurwa kuti riripire zvivi? MaKristu mazhinji haagoni kutsanangura izvi.
Mbeu yemhuka yakatukwa ikazoshanduka kuita nyoka mumashure mekutadza kwaEva yakakunda sei kudarika nguva yeMvura yaNoa? Hakuna nhorondo yemadzinza evanhu muBhaibheri inotsanangura baba vaKaini. Saka zvichibva mutsananguro dzeBhaibheri pamusoro pemadzitateguru evanhu haana munhu aive baba vake. Zvinoshamisa sezvo ndiye aive munhu wekutanga akatanga kuzvarwa. Asi vamwe vanhu vose vakazozvarwa mumashure meMvura yaNoa vane madzibaba akabva pana Shemu, Hamu, naJafeti.
Saka tinofanira kutanga nezvakareruka kana tichida kunzwisisa Bhaibheri.
Nhanho nhatu dzinofanirwa kutorwa pakuzvarwa patsva ndedzipi?
Uye chinangwa chaMwari muhupenyu hwedu kana tazvarwa patsva ndechei?
Nhasi tiri papi muzvikamu zveMuono Mukuru waMwari pamusoro penguva nomwe dzemakereke?
Chii chiri kuitika munzvimbo dzemweya dzatisingaoni munyika yedu yanhasi isinganzwisisiki uye Mwari anotarisira chii kubva kwatiri?
Kana tisina kubvira tafungidzira kut Trump aizokunda sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica hatisi kutoziva zviri kuitwa naMwari.
Zvinotora mwedzi mipfumbamwe kuti pazvarwe Mwana. Pane zviitiko zvakakosha zviviri, kubata mimba nekuzvara. Pakati pezviitiko zviviri izvi pane chiitiko chekukura apo mwana anokurira mumimba maamai vake.
Kubata mimba kukura, nekuzvarwa ndidzo nhanho nhati dzinowanikwa pakuzvarwa kwemunhu.
Asi kana mwana azvarwa, ndiko kunova kutanga kwehupenyu hwake.
Anenge akufanira kukura, odzidza, owana nzvimbo yake munyika yedu yakaoma.
Kudzidza, kurasa zvatinege tadzidza, nekudzidza zvitsva ndiyo kiyi yekubudirira munyika yedu iri kushanduka nekukasika yazara netekinoroji.
Kudzidza nekubata nekujaira zvinhu zvitsva hakuna magumo. Hupenyu hauna kumira panzvimbo imwechete.
Ngatiteverei nzira iyi kubva kuhupenyu hwenyika toishandisa pahupenyu hwedu hwemweya.
1 VaKorinte 15:44 Unodzvarwa uri muviri wokuberekwa, unomutswa uri muviri womweya, muviri wokuberekwa uri’po,nomuviri womweya uri’po.
Tese tinotangira mumuviri wenyama wakazvarwa. Asi mune kusakwana kuri mundangariro dzevanhu kunoda kuzadziswa chete neMweya waMwari.
Kana taive vemweya chaivo zvekugona kuona vanhu semiti, izvi ndizvo zvaizoonekwa munhu asati aponeswa akaita.
Nhanho yekutanga yekuzvarwa patsva kurovererwa nekuda kwezvivi. Munhu anova nekuzvininipisa kukuru nekuda kwehupenyu hwake hwakazara zvivi otendeuka okumbira kuregererwa nehunyoro. Zvino mutadzi akatendeuka anogamuchira Mweya waMwari mumoyo wemunhu, kana tichiona moyo setsime remanzwiro edu akadzama echokwadi. Kana tikatendeuka zvakazara, Mwari anoisa mugove weMweya Mutsvene wake mumoyo yedu, ngatitii wakakura kunge chigunwe chedu chihombe chemuruoko (kuti tive nemuenzaniso).
Mugove wemweya uyu unotanga hupenyu hutsva maari, zvakafanana nekubata mimba.
Munhu uyu akaponeswa. Mashizha manyoro mucherechedzo wemugove weMweya Mutsvene waMwari wakaiswa mumoyo wake wakatendeuka.
Chipikirwa ichi chinobata makore 2000 enhorondo yekereke. Hachigoni kutsiviwa zvachose. Rubapatidzo ndiwo wega mutambo unotigonesa kutora Zita raJesu Kristu. Mwenga anofanira kutora Zita remurume wake.
Rubapatidzo rwemvura runouya mumashure mekutendeuka. Mucherechedzo wekufa, kuvigwa pamwwe nekumuka kwaJesu.
Hunhu hwedu hwekare hunofa hwovigwa pasi pemvura. Zvino hunhu hutsva hwaKristu hunobva hwazvarwa mumoyo yedu.
VaRoma 6:3 Ko hamuzivi here kuti isu takabapatidzwa munaKristu Jesu, takabapatidzwa murufu rwake?
4 Naizvozvo pakubapatidzwa takavigwa pamwechete naye murufu; kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nokubwinya kwababa saizvozvo nesu vo tifambe novupenyu bwutsva.
5 Nokuti kana takava vamwe naye pakufanana naye parufu rwake, tichadaro vo pakumutswa kwake.
6 Tichiziva izvi kuti munhu wedu wekare wakarovererwa pamuchinjikwa pamwechete naye, kuti muviri wezvivi ushaiwe simba; tirege kuzova varanda vezvivi.
7 Nokuti wakafa, waruramiswa pazvivi.
8 Zvino kana takafa pamwechete naKristu tinovimba kuti tichararama vo pamwechete naye.
Chakavanzika chebudiriro ndechekuti hunhu hwedu hwekare hunofanira kufa totendera Mweya waJesu kuti ukure mumiviri yedu kuti agare matiri.
VaEfeso 2:8 Nokuti makaponeswa neNyasha, nokutenda; izvo zvisingabvi kwamuri, asi chipo chaMwari:
9 Hazvibvi pamabasa, kuti kurege kuva nomunhu unozvikudza.
Kutenda kwedu hakusi kwedu. Kunopihwa kwatiri naMwari.
Nyasha dzaMwari itsitsi dzatisina kufanira. Hatigoni kudzishandira. Tinokwanisa chete kuzvininipisa nekutenda kuti akatisarudza.
Kuponeswa kunoreva kuti takafanana nemudziyo wakasarudzwa naMwari.
Nhanho yechipiri pakuzvarwa patsva hutsvene. Apo Mweya waKristu unokura matiri, anoshandura hupenyu hwedu kuti atiite kuti tirambe zvivi nekuzvifungira isu tega torarama muhutsvene.
Izvi ndizvo zvinoonekwa zvakaita muKristu mutsvene akaponeswa. Mweya waKristu unenge wakuonekwa zvizhinji muhupenyu hwake.
Izvi zvakangofanana nemwana achikura mudumbu. Mwana anoita nhengo dzemuviri dzakaita semawoko nemakumbo netsoka nemaziso nenzeve zvisina zvazvinonyanyoshanda kana ari mudumbu. Asi zvinodiwa uye zvakakoshera kana azvarwa.
Saka muKristu anenge achirarama muchikamu chehutsvene anenge achikura muviri wemweya kuDenga. Nekukura kunenge kuchiita kutenda kwedu muShoko raMwari, saka “kusimba” kwemuviri wedu wemweya kunokurawo. Hutsvene hunobvisa zvivi. Panokura kutenda nehutsvene hwaKristu matiri muviri wemweya unokurawo kuDenga unoda kushandiswa naMwari kuti agamuchirire mweya yedu patinofa.
Mudziyo wakanatswa, usina zvivi, unokwanisa kushandiswa naMwari kana auzadza.
Rubapatidzo rweMweya Mutsvene rwuripo kuzadzisa mudziyo (moyo yevanhu yakatendeuka) kuti agone kutonga hupenyu hwedu uye zvatinotenda mazviri. Anongoda chete kuti vamwe vanwe kubva pamvura dzeShoko dzaakadurura mumoyo yedu.
Mwari anotizadza nemweya wake kuti tigone kumuda nekumubatira nekutenda zvakanyorwa muBhaibheri rake.
Mwari zvino anobva ada kutonga zvatinofunga nezvatinoita.
Munhu anobva aratidzika seizvi. Mashizha eMweya mazhinji. Zvibereko zveMweya. Kuzviratidza kweMweya waMwari. Asi uchiri nemamwe mapazi akafa. Pane chisati chazadziswa ruzivo rwakafanira rwechokwadi.
Johane 14:15 Kana muchindida, muchachengeta mirairo yangu.
Mweya Mutsvene uri matiri unoita kuti titerere mirairo. Asi kuchiri nezvizhinji muBhaibheri zvatisingagoni kunzwisisa.
Johane 16:13 Asi kana asvika, Iye Mweya wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvokwadi yose:
Chinangwa cherubapatidzo rweMweya Mutsvene ndechekutitungamirira muzvokwadi. Izvi zvakakosha nekuti takurarama munguva dzinotyisa.
Muedzo watinawo mukuru hutefetefe uye kudakara munzvimbo dzedu dzekuchengetedzeka dzatinopihwa semubairo wekuenda kumakereke nekutenda zvese zvinotaurwa nemapasita.
1 VaKorinte 12:28 Mwari wakaisa vamwe pakereke, pakutanga vaapostora, rwechipiri vaprofita rwechitatu vadzidzisi, tevere vaiti vemabasa esimba, tevere zvipo zvokuporesa, navabatsiri, navabati, namarudzi mazhinji endimi.
Mapostora akanyora Testamente Itsva kuti itange kereke yekutanga. Maprofita akanyora Testamente Yekare. Bhaibheri rakazara ndiro Shoko guru raMwari. Vadzidzisi vanofanira kutsvaga chokwadi chedzidziso yega yega muBhaibheri rese kubva kuna Genesisi kusvika kuna Zvakazarurwa. Zvavanodzidzisa zvinofanirawo kuenderana nezvakatendwa mazviri nekereke yekutanga.
Kutenda zvakanyorwa muBhaibheri chete ndicho chinhu chakanyanya kukosha cherubapatidzo rweMweya munguva yedu inonyengera yatiri kurarama. Kana tikanyengerwa nedzidziso dzenhema kuratidzira simba raMwari hakuzotiponese kubva munguva yeKutambudzika kukuru. Kana tichiziva simba raMwari, nei tichisiya Satani achinyengera ndangariro dzedu? Kefasi, Judasi naBaramu vose vakasangana nesimba raMwari rinoshamisa. Asi vose vakaenda kugehena nekuti havana kutenda kuchokwadi cheMagwaro.
Mbeu dzichakohwewa munguva yekereke yekupedzisira dzichange dzakafanana nembeu dzakadyarwa munguva yekereke yekutanga.
Ichi ndicho chinangwa chakanyanya kukosha chamunofanira kutsungirira kuti mukunde munguva yekereke yekupedzisira. Ndiyo nzira yega yamungatungamirirwe neMweya Mutsvene. Tendai zvakafanana nezvakatendwa pakereke yekutanga.
Izvi ndizvo zvinoratidzika zvichiita muKristu akazvarwa patsva anotendera Mweya Mutsvene kuti umutungamirire muzvokwadi yose kuti munhu uyu awane nzvimbo yake muMuviri waKristu wakavanzika. Izvi hazvina chekuita nezvinzvimbo zvemumakereke edu atinoenda.
Saka chinhu chakakosha chekutanga kuziviswa kwechokwadi.
Zvino vanhu vanenge vakugona kutarisana nemabasa emweya unoshamisa: minana nezvipo zvekuporesa. Kuporesa ndicho chega chipo chakataurwa muhuzhinji. Saka kune nzira dzakasiyana-siyana dzekuponeswa. Saka tinoremekedza zvipatara nemishonga zvese nenzira dzekudya zvakanaka zvinovaka miviri nekurarama zvakanaka dzinotipa hutano. Ruponeso runouya nenzira dzakawanda. Dzimwe nguva kupfurikidza mweya unoshamisa, dzimw enguva nemishonga. Kunyangwe kupedzwa kwezvirwere nekudzivirirwa nekubaiwa kana kufiritira mishonga chipo chekuporesa. Kupedzwa kwekorera nechirwere chetaifoyidhi kupfurikidza kunatswa kwemvura kunoita mashura makuru kwazvo pakuisira zvirwere miganhu. Hutsanana mukushandisa mvura nekugeza kusuka uye kuwacha nesipo nguva dzese kunoitawo basa guru kuisira zvirwere zvakaipa izvi miganhu. Aya mazano echimanje-manje anoshamisa. MuNguva dzeRima apo vanhu vaive vasingatombogeze sipo isingatowanikwi, tarisiro yekurarama kwevanhu yaive pamakore makumi matatu kana makumi mana. Nhasi vanhu vanotarisira kurama nguva yavo yakati rebei zvekusvika makore makumi manomwe. Mwari akatungamirira masimba enjere mune zvemishonga kuti vanhu vagadzire mishonga mizhinji yakanakira hutano nemiviri yedu zvinoita kuti hupenyu hwedu hurebewo. Miono iyi yese itori zvipo kubva kumusoro-soro.
Asi zviri pachena, mumwe munhu ane chipo chekuporesa anokwanisa kunamatira vanorwara vonaya, anenge arinechipo chinoshamisa kubva kuMweya.
1 VaKorinte 12:29 Vose vaapostora here? Vose vaprofita here? Vose vadzidzisi here? Vose vaiti vamabasa esimba here? Vose vane zvipo zvokuporesa here?
30 Vose vane zvipo zvokuporesa here? Vose vanotaura nendimi here? Vose vanodudzira here?
Hakuna ane zvipo zvese. Mupostora wemazuva ano haagoni kugadzira dzidziso itsva dzakasiyana nedzekutanga dzakanyorwa nemapostora muBhaibheri. Muprofita wanhasi anokwanisa kuprofita pamusoro peramangwana asi haagoni kushandura kana kupikisa chero chinhu chiri muTestamente yekare kana muTestamente Itsva. MaTestamente maviri iwayo anoramba ari Hukuru hwaMwari.
Mudzidzisi mushumiri anokoshesa dzidziso nezvakanyorwa muBhaibheri. Anofanira kuenda pavhesi nevhesi muBhaibheri opedzisira anedzidziso yakambotendwa mairi nekereke yekutanga. Kudzidzisa kunosnaganisira kutora zvakataurwa wozviedza neBhaibheri kusvikira pfungwa idzodzo dzakufambirana nezvinoreva Shoko raMwari. Kudzidzisa Bhaibheri hakuna chekuita nekutora zvakataurwa muchizvibatanidza kuti mubude nedzidziso.
Hakuna kutaurwa izwi rekuti “pasita (mufudzi)” anotonga kereke. Saka pasita haana kubvira akanzi anotungamirira nekutonga kereke.
Minana, kuporesa, ndimi, nekuturikira zvipo zvakapihwa vanhu vakasarudzika naMwari. Hazvisi zvevanhu vese. Saka hazvigoni kushandiswa sehumbowo hwehuvepo hweMweya Mutsvene.
Simba rekudzidza chokwadi chese kubva muBhaibheri ndihwo humbowo hweMweya Mutsvene unogara mukati medu. Hatifaniri kudzidza zvidimbu zvinotiitira kana kutifadza isu chete.
MuKristu akazadzwa neMweya anotongwa neMweya Mutsvene kuti munhu iyeye ashandiswe naMwari. MaKristu akazadzwa neMweya anotaura chete zvichibva muBhaibheri, kwete kubva kune dzimwe tsika dzekereke. Havatsvagi kubvumirana napasita wepanzvimbo pavari. Vanotsvaga kubvumirana neBhaibheri. Havarwisi Magwaro. Vanoda kwazvo kudzidza zvakawanda kubva muBhaibheri, kunyanya zvakavanzika zvakadzamisisa zvakaoma kunzwisisa zvinorambwa kana kufuratirwa nekereke kana zvinonzi nekereke hazvina kukosha vachiitira kuviga kusaziva kwevaparidzi vavo.
Chiitiko chekuzvarwa patsva chinenge chapera kana munhu akange azadzwa neMweya Mutsvene. Munhu iyeye, semwana mucheche achangozvarwa, anofanira kukura orarama owana nzvimbo mukuvimba. Mwari anoda kuisa munhu iyeye muMuviri wake, kereke yemweya.
Nhengo dzemuviri dzinoterera musoro.
Hakuna munhu anonzi musoro wekereke. Kristu ega ndiye muridzi wenzimbo iyi.
VaEfeso 5:23 Nokuti murume musoro wemukadzi, saKristu vo musoro wekereke:
Zvino Satani akushandisa hunyengeri hwese hwaanahwo kuti amise vatendi kubva pakutevera Bhaibheri chete.
Vadzidzi pavakabvunza nezvenguva yekupedzisira, Jesu akavayambira pamusoro pekunyengerwa.
Nhasi kune masangano emakereke emaKristu akasiyana anosvika 45000. Ese akasiyana asi vese vanoti ndivo voga vane chokwadi. Saka pachokwadi kereke yakazadzwa nekukanganisa. Saka dambudzoko redu nderekuti tinonyengerwa zviri nyore nemunhu anenge ari papurupeti. Vaparidzi ndivo vakagadzira zvitendero izvi zvose. Tinoenda kukereke kuti tinodzidza chokwadi. Ndiyo nzvimbo yekupedzisira yatinotarisira kunyengerwa tiri. Tinobva tavarairwa tonyegerwa. Satani akangwara kudarika zvatinofungira.
Chinogonesa miti yemweya iyi kubereka mashizha emweya akawanda zvakasiyana chii? Hudzamu hwemvura iri murwizi rwayakamira mumahombekombe marwo.
Mapisarema 1:3 Uchafanana nomuti wakasimwa pahova dzemura,
Ezekieri akayambuka murwizi rwaive nehudzamu hwakasiyana, muzviziso zvetsoka dzake, mumabvi ake, muchivuno make, zvino pamusoro pemusoro wake zvekuti aifanira kutuhwina.
Kana tikaponeswa tinenge tiri murwizi rweshoko raMwari. Danho rekutanga nderekuchapura mumvura shoma inosvika muzviziso zvetsoka dzedu. Apa tinogona kuita zvese zvatinoda. Mvura inoyerera zvakasimba inosvika muzviziso zvetsoka dzedu haigoni kutiyeredza pamwe nayo. Tinokwanisa kufamba zviri nyore kudzokera kumahombekombe kunezvenyika zvatambosiya kana tada zvedu. Tinenge tichiri kuzvitonga tega zvakanyanya muhupenyu hwedu.
EZEKIERI 47:3 Zvino murume uyo wakati achibudira kurutivi rwamabvazuva anorwonzi muruoko rwake, akayera mamita ane chiuru chimwe, akandiyambusa nomumvura, mvura ikasvikira kuzviziso zvamakumbo.
4 Zvino akayerazve mamita ane chiuru chimwe, akandiyambusa nomumvura, mvura ikasvikira kumabvi. Akayerazve mamita ane chiuru chimwe, akandiyambusa nomumvura, mvura ikasvikira kuchiuno.
Apa Mweya unenge wakura matiri kuti utiite vatsvene. Zvinoreva kuti mvura yakusvika mumabvi medu. Kana mukapinda murwizi runoyerera nekukasika rune mvura inosvika mumabvi munoramba muchigona, nekuomerwa kwakati kuti, kufamba muchitenderera nechero rutivi rwamunoda kuenda narwo. MuKristu mutsvene anokwanisa kuramba achiita zvaanoda asi manzwiro emoyo yavo ave kunyanya kuvadzora saka zvavanoita zvinenge zvanemuganhu. Zvinenge zvakunyanya kuoma kuita zvakaipa. Asi tinenge tichiri kugona kudzokera kumahombekombe kunezvenyika kana tichida, asi zvinenge zvisiri nyore. Mvura inoyerera inenge yoisa simba rakakura patiri kuti itidzore.
Apa munhu anenge azadzwa neMweya kana kuti azvarwa patsva. Mvura inenge yakusvika muchivuno make, mune hupenyu. Kana mvura inoyerera nekukasika ikadarika mabvi ako zvinenge zvaoma kwazvo kuti ugone kumira usingayeredzwe nayo. Munogona kumira mumvura asi hamuzogoni kufamba mairi muchienda kune chero rutivi kunze kwekuenda kwairi kuyerera ichienda. Saka munhu akazadzwa neMweya anogona chete kumira kana kuyeredzwa achienda kurikuenda mvura. Saka munhu uyu anenge achiri kugona kuzvitonga pamaitiro ake. Anenge achiri kukwanisa kutarisa zvakamupoteredza pazvikamu zvekusarudza dzidziso.
EZEKIERI 47:5 Shure kwaizvozvo akayera mamita ane chiuru chimwe; zvino rwakanga rwava rwizi, rwandakakoniwa kuyambuka; nokuti mvura yakanga yakwirira, yava mvura mungashambira munhu, ruri rwizi rusingabviri kuyambukwa
Munhu uyu atendera Mweya Mutsvene kuti amutungamirire muzvokwadi yose. Apa vazvipira. Chokwadi cheMagwaro chaita hudzamu kwazvo muhupenyu hwavo. Apa vakungotuhwina vachibva paGwaro vachienda pane rimwe apo Bhaibheri rinozivisa zvakawanda.
“Ndakanga ndisisakwanisi kudarikira” chero Gwaro muBhaibheri. Mavhesi eBhaibheri ese anofanira kukosheswa. Hakuna chinogona kubviswa pavhesi reBhaibheri. Vhesi rimwe nerimwe rinofanira kumira sezvarakanyorwa riri. Pachikamu ichi ndipo chete patinenge tatungamirirwa muzvokwadi yose naMweya Mutsvene. Iri ndiro basa rake guru.
ZVAKAZARURWA 22:18 Ndinopupurira mumwe nomumwe unonzwa mashoko okuprofita kwebhuku iyi, ndichiti: Kana munhu akawedzera pazvinhu izvi, Mwari uchawedzera kwaari madambudziko akanyorwa mubhuku iyi;
19 Kana munhu akabvisa mashoko ebhuku yokuprofita uku, Mwari uchabvisa mugove wake pabhuku yovupenyu, nomuguta dzvene, napazvinhu zvakanyorwa mubhuku iyi.
Vadzidzi pavakabvunza Jesu pamusoro penguva yekupedzisira akatanga kuvaudza kuti vangwarire kunyengerwa. Njodzi huru yatingasangane nayo kunyengerwa naSatani. Kunyengera kwezvitendero, mutasvi webhiza jena, ndiye muvenge mukuru watinotarisana naye.
MATEO 24:3 Wakati agara pagomo reMiorivhi vadzidzi vake vakavuya kwaari vari voga vakati, tivudzei kuti izvozvo zvichagova rinhiko? Nechiratidzo chokuvuya kwenyu nechokuguma kwenyika chichava chipiko?
4 Jesu akapindura akati kwavari, chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu.
5 Nokuti vazhinji vachavuya nezita rangu vachiti, ndini Kristu, vachitsausa vazhinji
Panguva yeKuuya kwake kwechipiri, dambudziko redu guru richave rekuti tichanyengerwa nevaparidzi vakazodzwa vanokurudzirwa nedzidziso yakaipa.
“Kristu” zvinoreva kuti akazodzwa. Kuzodzwa neMweya kuti vaite minana inoshamisa nekuporesa hazvirevi kuti dzidziso dzavo dzakanaka. Kuzodzwa kuti munhu aparidze nerurimi rwendarama runounganidza nekutapa njere dzevanhu hazvirevi kuti zvavanoparidza ichokwadi.
MATEO 24:24 Nokuti vachamuka vanaKristu venhema navaprofita venhema vacharatidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa kuti kana zvichibvira vatsause navasanagurwavo.
Ngatichitarisei zvinotaura Bhaibheri pamusoro pekereke yenguva yekupedzisira. Ndipo patichaona pane dambudziko redu.
23 Zvino ndichavavudza pachena handina kutongokuzivai, ibvai kwandiri imi vaiti vokusarurama
Kutadza nebwoni ndipo paunoita chinhu asi uchiziva kuti chakaipa wochiita zvakadaro. Vaparidzi vanozvivimba kuti vanonatsa nekuti Mwari akavakomborera nehushumiri hune simba. Vaparidzi vanogara nezvavanofunga ivo, tsika dzekereke dzavo, nezvakabatwa paitaura vanhu. Asi nemufaro vanoramba zvakanyorwa muBhaibheri. Bhaibheri rinofuratirwa zvakaipa kwazvo zvekuti maKristu vanhasi havachaziva Bhaibheri zvachose. Saka pakupedzisira, paKuuya kwake, Mwari acharamba vaparidzi ava nevateveri vavo vakanyengerwa zviri nyore.
Havasi vazhinji vachawanana nechokwadi.
Nzira nhete kakova katete-tete kemvura. Dzidziso inofanira kurondwa muBhaibheri, vhesi nevhesi, kuitira kuti mafungiro edu aenderane neBhaibheri zvakazara.
Ngatitarisei kukura kweMweya mumuKristu anopinda muzviitiko zverubapatidzo rweMweya Mutsvene.
Izvi ndizvo zvinoratidzika munhu uyu akaita.
Mweya wako ndihwo hupenyu hwako. Mhuka dzine hupenyu hunova mweya.
MUPARIDZI 3:21 Ndiani ungaziva kana kufema kunopa upenyu kumunhu kunokuisa kumusoro, kana kufema kunopa upenyu kumhuka kuchiburukira pasi?
Mweya wemunhu kana kuti hupenyu hwemunhu hune umwe mweya uri mahuri wakasarudzika usimo mumhuka uye mweya wemunhu unofanira kuenda kudenga kuna Mwari kunodavira pamusoro pezvivi zvemweya wakaputirwa mauri wakasarudzika unotiita kuti tive takasiyana nemhuka unonzi muChirungu saul. Ndicho chikonzero nei tichida Muponesi.
I SAMUERI 25:29 mweya washe wangu ucharamba wakasungirwa pachisote chavapenyu
JOBO 14:22 Asi kana ari iye, nyama yake inorwadziwa, Mweya wake unochema mukati make.
“Iye” ndihwo hupenyu kana kuti mweya. Mweya uri kutaurwa pavhesi iri ndiwo wemukati memweya (soul), nyama iri pamweya wekunze.
Uyu ndiye munhu asati aponeswa. Mweya wemunhu uri muruvara rwegirini unoreva kuti vanofadzwa nezviri hupenyu hwavo. Asi mune chikamu chekunatsa chatigadaidze kuti vhakiyumu chakapoteredza mweya wemukati memweya chinoita kuti hupenyu huite sehusina zvahunoreva. Vhakiyumu iyi inokwezva kusvuta, kunwa, zvinodhaka, bonde kunze kwewanano, kukarira pfuma yakaipa, mbiri, hupfumi, nezvimwe zvakadaro. Asi pazvese izvi hapana chinogutsa zvachose. Mweya unoshamisa chete ndiwo unogona kugutsa nzvimbo iyi yatingati vhakiyumu.
Munhu uyu anenge angoponeswa kubva kugehena (asi kwete kubva kunguva yeKutambudzika kukuru).
Mwari anenge aisa mugove weMweya wake Mutsvene muMunhu iyeye. Pakarepo mweya wemunhu unobva wadzima. Hatigoni kuponeswa tisina kurangwa nekuda kwezvivi zvedu. Kurangwa uku kunoita kuti tione kuti hunhu hwedu hwevanhu hwakarasika hwakaipa uye tinofanira kufa kuzvivi. Kubva panguva iyi panenge patanga hondo isina muganhu pakati pako neMweya. Chatinonyanya kupa chekudya zvakanyanya ndicho chinokunda.
Kana tikatendeuka tinenge taponeswa kubva kugehena.
Asizve tinenge tiri chikamu chehondo pakati pezvakanaka nezvakaipa apo tinotsvaga kuponeswa kubva kunguva inouya yeKutambudzika kukuru.
VAFIRIPI 2:12 …. pedzisai kuponeswa kwenyu nokutya nokudedera;
Hatigoni kuponeswa kubva kugehena nekuda kwemabasa edu. Izvi zvinotaura pamusoro pemabatiro atinoitira Mwari kubva paMagwaro kuti tiponeswe kubva pakuparadzwa kwekupedzisira kwenyika paanotora Mwenga wake wechokwadi kuenda kuDenga.
Kune nzira inoshandiswa naMwari muhupenyu hwemuKristu akaponeswa kuti ave akagadzirira Kuuya kwaShe.
Kuita kwemweya wehupenyu, mweya wemukati unotisiyanisa nemhuka unoita kuti tiwadzane naMwari, nemuviri ndiko kurongeka kwenzira inoshandiswa naMwari muhupenyu hwedu.
Mweya wehupenyu unodiridzira mweya wemukati une mbeu mauri. Mbeu inokura yoburitsa muviri wakafanira.
I VaTesaronika 5:23 Mwari worugare amene ngaakuitei vatsvene kwazvo; Mweya wenyu, nomoyo, nomuviri, zvichengetwe kwazvo, zvisina zvazvingapomerwa pakuvuya kwaShe wedu Jesu Kristu.
Tine kumwe kudaidzwa kana kuonekwa kunoitwa mweya unotisiyanisa nemhuka watinoti moyo. Unofananidzwa nemunda unodyarwa mbeu.
JEREMIA 31:12 mweya wavo uchava somunda wakadiridzwa, havangatongovi nokusuwazve.
Kana mbeu dzikadyarwa, munda unofanira kudiridzirwa, mucherechedzo weMweya Mutsvene.
JOHANE 7:38 Unotenda kwandiri, sezvazvakarebwa noRugwaro, nzizi dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibva mukati make.
39 (Asi izvi wakareva zvoMweya, ...)
Mvura inounza hupenyu panyika yakaoma.
I PETRO 1:23 Nokuti makaberekwa kutsva, zvisingabvi pambeu inovora, asi pane isingavori, neshoko raMwari benyu rinogara nokusingaperi.
Mweya Mutsvene, uchiita kunge mvura, unogona chete kupa hupenyu kumbeu yakadyarwa mumunda, unomiririra moyo kana kuti mweya unotiita kuti tisiyane nemhuka.
Saka pazvese tinotarisa mbeu yakadyarwa mumoyo yedu.
Tinosarudza pakati pembeu yekutenda yeShoko raMwari kana kuti mbeu yekunyengera inova ruzivo rwemunhu.
Asi mbeu inofanira kufa isati yabereka hupenyu.
Saka tinofanira kufa kuzvido zvedu uye kuzvitadzo zvedu tisati tava vanorarama muMweya Mutsvene.
I VAKORINTE 15:36 Iwe benzi, icho chaunodyara hachimeri, kana chisingafi.
37 Chaunodzwara, haudyari muviri uchavapo, asi tsanga bedzi, kana yamapfunde, kana yezvimwe;
38 Asi Mwari unoipa muviri paanoda napo, nembeu imwe neimwe muviri wayo.
Kana tiine Mbeu yeShoko mumoyo yedu kana mweya yedu yemukati, nhanho yekutanga kudiridzira Mbeu yeShoko neKutenda kweMweya Mutsvene.
Mweya Mutsvene unobereka Kutenda muShoko. Mbeu yeShoko iyi inobva yatanga kukura yobereka muviri weShoko kupfurikidza kuunza miviri yedu pakuzvininipisa kuShoko raMwari apo tinorarama hupenyu hutsvene hwakarurama.
Midzi inokura ichidzika kuratidza kukura kwakadzama muShoko raMwari. Izvi zvinosimbisa muti kuitira kuti mashizha awo akure achikwira kumusoro “mumhepo” yeMweya Mutsvene paanofamba nenyika.
VAROMA 1:20 Nokuti kubvira pakusikwa kwenyika, izvo zvake zvisingavonekwi, iro simba rake risingaperi novuMwari bwake, zvinovonekwa kwazvo, zvichizikanwa pazvinhu zvakaitwa; kuti varege kuva nepembedzo;
Kuzvarwa patsva kunotevera nzira imwechete iyi sembeu yakadyarwa.
Pekutanga mbeu inodiridzirwa. Mbeu yotanga kukura. Kana mbeu ikakura inoita muviri unoitira hupenyu huri mumbeu.
Mudzi wepakati mucherechedzo waKristu. Iye ega ndiye anogona kutiita kuti tikure takasimba muShoko raMwari.
Mweya unopa hupenyu kuMbeu yeShoko mumweya wemukati kana moyo. Saka kunotanga Mweya, kwozouya moyo kana mweya wemukati.
Zvino mbeu yeShoko inokura inopedzisira yabereka muviri wakakodzera kurarama hupenyu hutsvene hwekuteerera Shoko raMwari. Saka kurongeka kwemashandiro ezvinhu kunoti mweya, moyo kana kuti mweya wemukati kwozouya muviri.
Mweya mutsvene mumunhu akaponeswa unokwanisa kukudza Mbeu yeShoko iri mumoyo kana kuti mumweya wemukati. Mbeu yeShoko iyi inobva yakura yoita kuti miviri yedu izvininipise kuitira kuti miviri yedu ive midziyo yakakodzera kushandiswa naMwari.
Hutsvene zvinoreva kuti munhu, mweya wemunhu wakarasika, unoderera apo Mweya Mutsvene unokudzwa maari.
Rubapatidzo rweMweya Mutsvene ndipo apo munhu anenge azadzwa meMweya Mutsvene zvekuti Mwari anokwanisa kutonga zvese zvaanoita nezvaanofunga. Vanenge vafa zvakakwana kuzvido zvavo kuti Mwari avatore avashandise.
Chidimbu chekuita kwavo kwevanhu kwakarasika kunoramba kuripo, asi kunenge kusisina kukura zvachose.
Mwari anenge akukwanisa kutanga kuvatungamirira kupfurikidza Bhaibheri kuitira kuti vadzidze chokwadi chese cheBhaibheri chezuva redu ratiri kurarama.
Kune mukova mumwechete wekusvika pamoyo kana mweya wemukati unova simba rekuzvisarudzira.
Munosarudza kuti munoda kutenda here kana kuti kwete.
Asi kana “simba rekuzvisarudzira kuita zvatinoda” rikatonga moyo kana mweya wemukati hamugoni kuva nekutenda kwakakwana kuti mutende kune zvakanyorwa muBhaibheri. Tinogona kutenda chidimbu cheBhaibheri asi tiri nyore kunyengerwa tichinzi mune zvakakanganiswa muBhaibheri uye rinozvirwisa. Tinobva tatenda kuti vadzidzi veBhaibheri vemazuva ano vakashandura zvinorehwa nemazwi akawanda emuBhaibheri. Tinogamuchira tsika dzemakereke dzinobva dzatsiva Magwaro. Simba rekusarudza kuita zvatinoda rinoguma ratiita kuti titende zvimwe zvidimbu richititendera kufuratira zvimwe kana kushandura zvimwe zvidimbu zveBhaibheri. Tinogamuchira zviri nyore kuti Sainzi dzakakurira tsananguro yekusika kuna Genesisi kupfurikidza tsananguro dzaDarwini dzekushanduka kwemhuka dzichiita vanhu (Evolution) netsananguro dzeBig Bang (kana fungidziro). Saka kutenda kwedu kwakaneteswa. Aya haasi mamiriro ezvinhu anofadza.
Kuvimba nekugona kuzvisarudzira, kunyange tikaedza nepatinogona napo zvakadii, tinopedzisira takukakavara zvinotaurwa nemamwe Magwaro tokakavara kuti Mwari ari kutitarira kana zvinhu zvese zvaenda nenzira yakaipa. Tinokurudzirwa nevamwe kuti mamwe Magwaro haana maturo kana kuti anorwisana kana kuti akakanganiswa.
Saka tinofanira kuzvarwa patsva kana kuzadzwa neMweya Mutsvene kana tichida kuva vatendi vechokwadi muMagwaro ese.
Nzira imwechete yatingape Mwari simba rekutonga hupenyu hwedu kuzvipira, kubva pakusarudza kwedu tega kuita saizvozvo, kuramba kuda kwedu kwaari tomutendera kutsiva kuda kwedu neKuda kwaMwari. Kubva ipapo tinenge tisisina kuda kwedu kwatinoita.
Chero zvaitwa naMwari nehupenyu hwedu, ndizvo zvatinotambira. Ndiko kuda kwake.
Tinoziva kuti takazadzwa neMweya kana tikamira kunyunyuta pamusoro pezvinotiwira.
Chero chinhu chaitika chakanakira “zvinofungwa naMwari” chero zvichirwisana nekuda kwangu. Saka ndinofa pakuita kuda kwangu ndogamuchira kuda kwaMwari. Zvino kubva ipapo chero chaitika chinenge chakanaka, nekuti kuda kwaMwari kunege kuchizadziswa. Ndiye akakosha, kwete ini. Uye kana andisarudza kuti ndive chikamu chechimwe chinhu chisingafadzi kana chisina kundinakira, ndinofara kumubatira ndiripo. Pakupedzisira, kuda kwake chete ndiko kwakakosha.
Simoni wekuSairini aive asingadi kutakura muchinjikwa. Akamanikidzwa kuzviita zvichipikisana nekuda kwake iye. Asi ndiro zuva raakabatira Mwari nekubata kukuru.
Kutenda kwakazara muMagwaro ese ndizvo zvinotarisirwa naMwari kubva kwatiri.
MATEO 26:39 Akapfuvura mberi zvishomanene, akawira pasi nechiso chake, akanyengetera achiti, Baba vangu kana zvichibvira mukombe uyu ngaupfuvure kwandiri. Kunyangwe zvakadaro kurege kuva kuda kwangu asi kuda kwenyu.
Uku ndiko kwaive kuita kukuru kwekuzvininipisa kwekuda kwemunhu achiita kuda kwaMwari.
Hakuna imwe nzira yekufamba nayo.
Judasi akamhura vanhu vanonyunyuta nekutsutsumwa nekuti kuda kwavo kunotonga kufunga kwavo.
JUDASI 1:16 Ivo van’un’uni navasingatendi nezvavanazvo, vanofamba nokuchiva kwavo; (miromo yavo inotaura mashoko ekuzvikudza), vachikudza vanhu nokuda kwokufumiswa.
Chii chinonzi kudududza kana kudzokera shure?
Ndipo panopindira kuda kwemweya wemunhu kwokura Mweya Mutsvene wodupukiswa.
Kutendeuka kwezvokwadi ndiko mushonga chete wechinhu chinosuwisa ichi.
Tinofanira kutsungairira kutendeuka.
Zvimwe mufananidzo waJesu une mbiri kwazvo pamusoro penguva yekereke yekupedzisira inyaya yevasikana vane gumi. Mukadzi mucherechedzo wekereke nekuti kereke ndiyo Mwenga waKristu. Ava vose vasikana, vakadzi vakachena. Uyu mucherechedzo wemaKristu akaponeswa.
MATEO 25:1 Zvino vushe bwokudenga bwungafananidzwa navasikana vanegumi. Vakatora mwenje yavo, vakabuda kundochingamidza chikomba.
2 Vashanu vavo akanga ari mapenzi, vashanu vakanga vakachenjera.
3 Nokuti mapenzi akatora mwenje yawo akasatora mafuta.
4 Asi vakanga vakachenjera vakatora mafuta mumidziyo yavo nemwenje yavo.
5 Zvino chikomba chakati chichinonoka vakatsumwaira vose vakavata.
Ichi ndicho chimiro chinosuwisa chekereke yenguva yekupedzisira. Munhu wese akarara. Vose vakachejera nevakapusa. Izvi zvinoreva kuti imi neni nevamwe maKristu ese akaponeswa. Kunzi takarara zvinoreva kuti hatizivi zviri kuitika. Asi vanhu vakarara vanenge vakadekara nekuvarairwa kwazvo uye havadi kukanganiswa.
Munhu wese anoramba izvi votaura kuti ivo nemakereke avo vakamuka. Asi kutaura uku kunorwisa Magwaro.
Saka kana muchida kutungamirirwa muzvokwadi munofanira kubvuma zvinhu zvitatu zvisina kudekara mazviri.
Chekutanga, maKristu ese akaponeswa (zvinosanganisira vaparidzi vose vakaponeswa) vakarara saka vari kure nekuyanana nechokwadi. Ndicho chikonzero nei vaparidzi vakafanoita fungidziro dzekuti Hillary aizokunda sarudzo dzemutungamiri weAmerica dzemuna 2016.Vaive vasingadi Trump nemararamiro ake aaiita. Asi vakakanganisa zvakazara vakarasika pachikamu ichi chese.
Mwari aida munhu aizoita Jerusarema guta guru reIsraeri. Pasi rese rinopikisana nazvo.
Vatungamiri veNyika vekwaBush baba nemwana pamwechete naClinton havana kubvira vaita zvivindi zvekuda kupikisa maMosiremu pamusoro peJerusarema. Obama aive akanaka kwazvo haana kubvira awanawo zvivindi zvekuita izvi. Aive akabatikana kwazvo nekutarisana nezvekodzero dzevaya vanoita zvengochani. Zvimwechete naHillary. Saka vatungamiri ava vose vaive vasina basa zvachose muzvikamu zvekuzadzisa zano raMwari rekudzosera Israeri kunyika yeChipikirwa. Obama akatendera sarudzo dzeUN (mubatanidzwa wenyika dzepasi rese) kuti dzimhure Israeri chinguvana asati abva pachigaro. Nyaya huru yehupofu pamweya sezvo vaHedeni vazhinji vasingazivi kuti Mwari ari kutendeukira kuvaIsraeri.
Saka Trump, akaomeswa nemakore mazhinji aakaita ari mumabhizimisi, akatarisana nemifungo yepasi rese yaimupikisa akamanikidzira kuda kwaMwari pamusoro peIsraeri. Mungave musingadi Trump asi munhu akashinga ane zvivindi zvikuru kwazvo. MaKristu akaponeswa aive akanyanya kuvata kwazvo mukakereke avo kuti vaone kuti nyaya chaiyo yaive yei. Mwari ave kutendeukira kudzokera kuIsraeri. Zvinoreva kuti ari kutendeuka achibva kukereke. Saka zviri kuitika kuAmerica zvingori zviraridzo. Nhasi, chakakoshera America kunaMwari kubatsira kwainoita Israeri. Zvinoitika kuIsraeri zvakakosha pazvinhu zvakaprofitwa muBhaibheri. Jesu achadzoka kuzosangana nemaJuda 144000 muIsraeri.
Rubapatidzo rweMweya Mutsvene runokwaisa kutitungamirira muMagwaro ruchitizivisa zviri kuitwa naMwari nhasi.
Chinhu chechipiri: Kana makereke akarara zvinoreva kuti vaparidzi ndivo vari kuvaita kuti vagare vakarara.
Vanhu vanoda makereke avo kudarika kuda kwavanoita Mwari. Vakadekara zvakanyanya zvekuti havachada kana kukakavara nezvinotaurwa nemuparidzi. Havazivi zvakakwana pamusoro peBhaibheri kuti vabvunze mibvunzo.
Kuenda kukereke nguva dzese uye kuteerera kusina mibvunzo kuvafundisi vanodakadza ndidzo dzave nzvimbo dzekuchengetedzeka dziri maKristu akamirira “kukwira kuDenga mukubwaira kweziso”.
Asi zvinhu hazvisi nyore saizvozvo. Kune Rugwaro runovhundutsa runoita serunofuratirwa zvakanyanya.
VAFIRIPI 2:12 … pedzisai kuponeswa kwenyu nokutya nokudedera;
Gwaro iri ringashanda sei kwatiri kana tichirarama takadekara mumatura edu ekuyanana (anonzi makereke) ane madziro ari mudenga kwazvo anotipatsanura kubva kune chero vanhu vanobvunza mibvunzo yakaoma kana kupokana nesu. Saka takasungirirwa mukudekara kwedu apo tinofuratira zvinofungwa nevari kunze kwemakereke edu uye yambiro nemazano avo.
Chisikwa chipenyu kana chikara cheAmeria kuna Zvakazarurwa Chitsauko 13 ndiwo musoro wepfumo unounza chiratidzo chechikara chinomiririrwa nemasangano ezvitendero akarongwa nevanhu.
ZVAKAZARURWA 13:11 Zvino ndakavona chimwe chikara chichikwira, chichibva panyika; chakanga chinenyanga mbiri segwaiana,, chikataura seshato.
Chirwere chemhezi chesimopokisi chakauya kuAmerica nevapambi vekuSpain. Chakauraya vakawanda vemaIndia ekuAmerica. Madzibaba emaPilgrim paakasvika paPlymouth Rock muna 1620, vakatanga bato rakatora ‘nyika’ kana nzvimbo huru dzaive dzisina chinhu dzaive nevagari vashoma kwazvo kana zvichienzaniswa neruzhinji rwevanhu rwuri muEurope runomiririrwa “negungwa” mune zvakaprofitwa.
Vakatanga nerusununguko rwezvitendero mumashure mekupunyuka kwavo kubva mukuuraya kweCatholic muEurope. Vakatanga nerusununguko rwekutaura vakazoguma vabuda negwaro rakanakisa rezvematongerwo enyika pasi rese nebumbiro remitemo yavo yeAmerica. Nyanga mbiri dzesimba dzegondobwe. Vatungamiriri vakuru vakaita saWashington naLincoln vakavaona vachisimuka vachigumavaita simba repasi rese.
Asi Simba rinowodza. Chikara kana Satani anobva apindira. MaIndia emuAmerica akatorerwa nyika yawo. Vanhu vaisvika miriyoni vakafa muhondo yemarudzi nyika dzekuchamhembe dzisati dzamanikidzwa kugumisa kuita vanhu nhapwa. Hondo nemhirizhonga zvakavaka maindasitiri ezvemauto.
ZVAKAZARURWA 13:16 Chinomanikidza vose, vaduku navakuru; vafumi navarombo, vakasununguka navaranda, kuti vapiwe chiratidzo muruvoko rwavo rworudyi, kana pahuma yavo.
America yakashandiswa naMwari kutungamirira pasi rese murumutsiridzo rwePentecositi musenturi radarika. Oral Roberts ndiye ainyanya kuzivikanwa wezvePentecositi. Billy Graham ndiye ainyanya kuzivikanwa pavavhangeri. America yaivewo musha wemuprofita kuvaHedeni wenguva yekupedzisira William Branham akazivisa Zvisimbiso zvitanhatu muBhuku raZvakazarurwa zvakazarura zvakavanzika zveShoko raMwari kuti tidzokere pakutenda kwenguva yekereke yekutanga.
Asi kubva pamatangiro makuru akadai zvinhu zvakabva zvawira pasi. Pentekosti yakapatsanuka ikarongwa kuita masangano mazhinji akasiyana siyana. Mumhanzi wemadhisiko nehunyanzvi zvakaita kuti makereke akoshese kufadza vanhu.
ChiKristu chemakwikwi chine mari zhinji sezvo vachirwira mari yevanhu vakatendeka. Makereke anouya nezvinyorwa zvezvinoda kutengwa nevanhu muzvitoro kuna Mwari asi vachitaura zvishoma kwazvo zvezvinodiwa naMwari kubva kuvanhu. Evangeri riri nyore risingatyisi vanhu kana kuvarundutsa. ChiKristu chava kutsvaga mafaro. Hamufaniri kufunga zvakanyanyisa pamusoro peBhaibheri nekuti munongokwanisa kufuratira zvinoita sezvinorema zvacho.
Saka hamufaniri kufunga. Kune vanokufungirai. Saka hamuna basa nekuziva Bhaibheri. Kusaziva Bhaibheri kunotiita kuti tive nyore kusukurudzwa pfungwa kunova chiratidzo chechikara. Zvese zvatinotenda zvisiri muBhaibheri, zvese zvatinotenda zvisina kutendwa mazviri nekereke yekutanga, zvinoratidza kuti takura nekubudirira sei takananga kunzira yechiratidzo chechikara.
Zvakataurwa naWilliam Branham zvaivepo kuzivisa zvakavanzika zveShoko rakanyorwa. Izvozvi zvaakataura zvakushandiswa senheyo dzechokwadi. Asi kuturikirwa kwezvakataurwa izvi hakugoni kuteverwa kuchiwanikwa muBhaibheri kubva kwekutanga kusvika kwekupedzisira saka zvinobvisa vanhu paMagwaro akanyorwa. “Hamugoni kugadzirisa muprofita’ndizvo zvinotaura vanomutevera. Zvikuru sei vaparidzi vanoda simba pamusoro pevanhu vasina miganhu inovaita kuti vatevere zvinotaurwa neMagwaro chete. Saka vanoona hama Branham seaisatadza. Ndiye mukuru wavo. Vakamuita nekusaziva Pope wechipiri. Chinhu chimwechete chakaunza madzibaba emaPilgrimi kuAmerica kuti vapunyuke kwachiri.
Nhasi, sezvo tava pedyo nemagumo sezvo tava kupinda musenturi rechimakumi maviri nerimwe. Zvakaprofitwa kuna Zvakazarurwa 13:16 izvi zvinotaura kuti panguva yekupedzisira makereke muAmerica, zvisinei kuti ndevemasangano kana vasiri kana vanotenda kumharidzo, vachatungamirira pasi rese kufamba munzira yakaipa. Asi ndivo vane mari nembiri yese, saka pasi rese richavatevera richipinda munguva yeKutambudzika.
MATEO 25:6 Pakati povusiku vakanzwa mhere-mhere: Chikomba chovuya! Budai mumuchingamidzei!
7 Zvino vasikana vose vakamuka, vakagadzira mwenje yavo.
Chinhu chechitatu: chimwe chinhu chichaitika munguva inouya chichamutsa vanhu vose. Hachisi kuzoitika mukereke menyu kana medu nekuti mhere mhere yakabva kumwe kunhu kunze.
Chii chichamutsa makereke ese panyika?
Fungidziro yenyu yakangonaka kunge yangu. Matambudziko ane tsika yekuita kuti vanhu vakoshese kuwadzana kwavo naMwari. Kana tiri mudambudziko chairo tinoisa Mwari pamberi.
Dzimwe nguva chiitiko chiduku semhere-mhere yekudanidzira inokwanisa kushandura chiitiko nekukasika.
Padanho iroro munguva makereke ese anoona kuti aive akarara nekuti chiitiko chavaive vasina kubvira vatarisira chinenge chaitika pakarepo chikakurira pasi rese. Kutevera muparidzi inenge isisiri sarudzo yekutora zvachose sezvo achange avhundutswa sevamwe vanhu vose musangano.
Mwenje nemafuta ayo iripo kupa chiedza. Asi tinoshandisa chiedza kuti tione chimwe chinhu. Kuti tione kuti Shoko raMwari rinorevei. Tozogona kutevera makwara eMagwaro, kusanganisira mavhesi aya ese aifuratirwa nevaparidzi vachiti haana basa nekuti ivo vaive vasinganzwisisi zvaaireva.
MATEO 25:8 Mapenzi akati kunavakachenjera: Tipeiwo mamwe mafuta enyu, nokuti mwenje yedu yodzima.
MaKristu akaponeswa aya haana chiedza saka havagoni kuona zvakanyorwa muMagwaro zvichishandiswa mifananidzo nemicherechedzo. Vane zvakawanda zvakaipa zvavanotenda mazviri zvinovamisa kuona zviri kure. Kusaziva kwavo Bhaibheri kuchavaparadza pakupedzisira. Munoda chiedza kuti muverenge Bhaibheri. Havana chiedza, dzidziso dzine mbiri chete dzekereke dzakafanana neKisimusi musi wa 25 Zvita. Bhaibheri harina kubvira ratiudza kuti tipemberere kuzvarwa kwaShe. Kereke yeRoman Catholic ndiyo yakaita dzidziso iyoyo makore akapoteredza 350 AD pavakatevedzera mhemberero dzezuva rekuzvarwa kwamwari wemapegani wezuva rakaitwa musi wa25 Zvita nemubati weRoma Aurelian muna 274 AD. Vanasikana veRoma masangano anoipikisa akabuda mairi vakatevera muenzaniso wayo zvakanakisa, kwete Bhaibheri. Panguva yekupedzisira kukanganisa kwavakaita Magwaro kuchavakonzeresera zvikuru pavachapinda munguva yeKutambudzika kukuru. Chakaipa chese chatinotenda machiri, chinotitadzisa kuona chokwadi chakadzama.
Saka ndechipi chiitiko chatinoziva nezvacho, chiri kuuya munguva inouya? Mhinduro huru imwechete yatisingarambani nayo ndiko kumuka kwevakafa. Kana vatsvene vakafa kubva munguva dzemakereke vakaonekwa vakataura nevanhu, ipapo maKristu anhasi vachatyiswa kwazvo kuziva kuti vari kure zvakadii nechokwadi cheMagwaro. Pachava nekumhanya-mhanya kukuru kuedza kuswatudza dzidziso dzavo nekuwana chiedza chekuonesa mavhesi emagwaro.
Asi vachava nenguva here yekuita izvi? Kwete. Vanhu havagoni kurasa zvavakadzidza mutsika dzavo nekukasika kwakadaro voedza kudzidza zvimwe. Nei? Nekuti havana kudzidza kuzvifungira. Vanongogara mukereke vosiya pasita achivafungira zvese.
MATEO 25:9 Asi vakachenjera vakapindura, vakati; Kwete , zvimwe haangakwaniri isu nemi tose; endai henyu kunavanotengesa, muzvitengere.
Tinofanira kuripira muripo wechokwadi. Munofanira kubvunza vatungamiri venyu nekuzvifungirawo mega kubva paMagwaro. Vanhu vashoma vanoita izvi vanodzingwa mumakereke. Saka hatipokani nemakereke asi tinongosukurudzwa pfungwa tiri mune rimwechete remasangano 45000 emakereke anotenda zvakasiyana.
Mutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10 anouya pasi panyika kuzomutsa vakafa kubva panyika uye mugungwa mavakavigwa mukati menguva nomwe dzemakereke.
Asi, rangarirai, kana zvikaenda mumumvuri werufu, “ndini rumuko nehupenyu; ndichamumutsa zvakare.” Uye kana Mukuru akauya pasi akabaira hoko pasi, ipapo, “nguva haizovipi zve.”” kana Mutumwa, wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10, aisa tsoka yake imwe panyika imwe mugungwa nemurarabungu pamusoro pemusoro wake, Anopika, “nguva haizovipo zve.”
Kana nguva iyoyo yasvika, muchamuka pakati pevakafa. Apo vamwe vese vachange vari pakadaro apo, muchapinda mukati.
Kana Izwi reMutumwa mukuru uyu ramutsa vakafa kutinhira kunomwe kwakavanzika kunobva kwareva manzwi ako.
Mwenga haasati awana rumutsiridzo. Mazviona? Hapasati paitika rumutsiridzo apa, hapana kuzviratidza kwaMwari kuti asanganise Mwenga wake. Mazviona? Takakutarisira. Kuchatora kutinhira kunomwe kusina anoziva kuti kumumutse zvakare. Achakutumira. Akavimbisa kudaro. Zvino, zvino, tarirai. Zvino aive (mwenga kereke) afa.
“Achakutumira”. Izvi zvakataurwa zviri zvenguva yaizouya. Kutinhira kunomwe kwakagadzirirwa kumutsa Mwenga weMagwaro ane mafuta akakwana kuti apenyese chiedza chakakwana paBhaibheri kuti vaone zvinorehwa nemavhesi eBhaibheri akaoma kunzwisisa.
Ndicho chikonzero chikuru nei tichida Mweya Mutsvene. Tinofanira kugona kuwana magwara akavanzwa muBhaibheri asina kunyorwa nezvirevo zviri pachena.
Mutungamiri wenyika Trump ane zita rekutipa gwara rekuti tizive kuti tatarisana nenguva “yehwamanda (trump) yaMwari” zvinoreva kuti tava pedyo nenguva yekupedzisira. Hutungamiri hwake chiratidzo chenguva. Kunyanya kuita kwaakaita Jerusarema guta guru reIsraeri.
Nhume nhatu dzakauya kuna Abrahama Sodoma, guta raive nekodzero dzekuita zvechingochani, risati raparadzwa. Billy Graham kune vaive vasiri vePentekosti, Oral Roberts kunevePentekosoti, William Branham kuMwenga waKristu. Mumashure mekubva kwavo, kwakadonha moto. Billy Graham, wekupedzisira pavatatu ava uye muvhangeri akazivikanwa zvakanyanya akafawo. Chimwe chiratidzo chenguva.
Zvichaitika kana Kutinhira kunomwe kwareva hatizvizivi sezvo zvisina kunyorwa muBhaibheri. Asi kuchave nemagwara eMagwaro atichatora kuti atitungamirire kuti todii pakugadzirira Kuuya kwaShe. Vasikana vakachenjera vachange vari mubishi rekuedza kuburitsa pachena zvakavanzika zvakadzama izvozvo zvakavanzwa neimwe nzira muBhaibheri zvisina kunyorwa, zvekuti havazowani nguva yekuedza kudzidzisa vasikana vakapusa kana mapenzi zvakakosha zveMagwaro.
Ino yava nguva yekuti tinzwisise Bhaibheri. Sezvo vaparidzi mumakereke vaitaura vachipikisa Trump mukutsvaga kwake rutsigiro kuti asarudzwe kuva mutungamiri wenyika nekudaro vaipikisa zano raMwari, saka tinofanira kutevera Magwaro zvakazara kuitira kuti tisapikisane nezviitiko zvisina kujairika zveKutinhira kunomwe.
2 Wakanga akabata bhuku duku yakazaruka muruvoko rwake, akaisa rutsoka rwake rworudyi pamusoro pegungwa, norworuboswe pamusoro penyika;
3 Akadanidzira nenzwi guru seshumba inorira; iye wakati adanidzira, kutinhira kunomwe kukabudisa manzwi ako.
4 Zvino kutinhira kunomwe kwakati kwareva, ndakanga ndonyora, ndikanzwa inzwi richibva kudenga, richiti kwandiri: Zarira zvarebwa nokutinhira kunomwe, usazvinyora.
Kutaura uku kwese kunoreva kudanidzira kweMutumwa mukuru kunoshandiswa kutsanangura kumutswa kwevakafa.
“Akadanidzira nenzwi guru” ndizvo zvakaitwa naJesu pakamuka Razaro kubva kuvakafa.
“Wakati adanidzira” pamuchinjikwa musi weChishanu zvakayananiswa nekumuka kwevatsvene veTestamente Yekare kubva kuvakafa vakamuka mumashure mekutanga kumuka kwaJesu kubva kuvakafa.
53 Vakabuda pamabwiro iye amuka vakapinda muguta dzvene. Vakavonekwa navazhinji.
Inzwi reMutumwa mukuru (panouya Jesu ari Mutumwa) rinomutsa vakafa nekumutsa kereke. Asi avo chete vanoziva zvakakwana pamusoro peBhaibheri ndivo vachagona kutevera gwara raro.
Ndicho chikonzero nei Sherlock Holmes iri ndiyo nyaya yetsvagiridzo ine mbiri. Aive nesimba rinoshamisa rekuwana tumakwara tuduku-duku tunenge twasiirirwa nevamwe vanhu vese. Izvi zvinofadza vanhu.
MATEO 25:10 Vakati vachienda kundotenga, chikomba ndokusvika, zvino vakanga vakazvigadzirira vakapinda nacho pamutambo wokuwana. Mukova ukapfigwa.
Chinangwa cheMweya Mutsvene, mafuta ari mumwenje, ndechekupa chiedza chakakwana kuitira kuti vasikana vakachenjera vagone kubatanidza Magwaro pamwechete nenzira yekuzivisa zvakavanzika zvakavanzwa zveKutinhira kunomwe kuchapa Mwenga “kutenda kwekukwira kudenga”. Iyi ndiyo mvura yekupedzisira yekukohwa kana kuti mvura inotevera sezvo zaruriro idzi dzichabvisa vanotenda panyika kuti vanosangana naShe mumakore. Kukohwa ndipo panobviswa mbeu kubva padavi radzakaberekwa rinenge rafa.
Izvi zvisati zvaitika kunouya mvura yekutanga kana kuti mvura yedzidziso. Tinofanira kudzidza chokwadi cheBhaibheri izvozvi. Kana rumuko rwaitika tinenge tava mumvura yekukohwa nekuti vanenge vabviswa kubva mumabwiro avo. Zvino munozofanira kuziva zvamunenge muchitaura nezvazvo nekuti panenge pasisina nguva. Magumo anenge aswedera.
Vasikana vakapusa ndivo mashanga akafa nehundi zvinosara kuti zvidyiwe nechikara uye kuti zvitsve munguva yeKutambudzika kukuru. Nekuti vakaponeswa nguva yekutambudzika isati yasvika vanozoguma vava Kudenga asi havazovi nhengo dzeMwenga. Vanozopedza makore 1000 vari pakati pevakafa muna Kristu vozoonekwa Zuva reKutongwa ipapo vanozosiiwa vachirarama. Ndiyo imwe nzira yekuenda nayo kudenga nekuti havana kutora nzira yakamanikana pavaive nemukana.
MATEO 25:11 Pashure vamwe vasikana vakasvika vakati, Ishe, Ishe tizarurirei!
12 Akapindura akati zvirokwazvo ndinoti kwamuri, handikuziviyi imi.
Asi nguva yavakazochenjera vaive vatononoka. Ishe vaive vatouya vaenda.
Mvura yekutanga yaive mvura yedzidziso inofanira kupedzisa zvakavanzika zvaMwari yotigonesa kuverenga Shoko raMwari rakanyorwa tichirinzwisisa.
Asi makereke nhasi anobva paMagwaro akanyorwa. Anoteerera mazwi avanhu kwete Bhaibheri.
JOHANE 10:26 Asi imi hamutendi, sezvandakareva nokuti hamuzi vamakwai angu.
27 Makwai angu anonzwa inzwi rangu; neni ndinoaziva, vuye anonditevera.
Jesu anoziva avo vanonzwa izwi rake chete, rinova Shoko raMwari.
Mapasita kana vafundisi vanozviti vafudzi (shepadhi pachirungu). Hakuna Magwaro anoti mufudzi (shepadhi) ndiye mufudzi (pasita).
Mufudzi (shepadhi) munhu saka nekudaro ari pamusoro pehwai. Hakuna mufudzi (pasita) ari pamusoro kana kuti ari nani kupinda vanhu vari musangano. Ndidzo dzinonzi tsika dzavanikoraiti, kusimudzirwa kwemunhu mutsvene pamusoro pevamwe vanhu.
I PETRO 2:5 Nemi vo, samabwe mapenyu, muvakwe muve imba yoMweya, muve vuPirisita vutsvene,
Vaprista vose vakaenzana. MuPrista mukuru chete, Jesu, ndiye ari pamusoro pevaprista vose.
Saka maKristu ose akaenzana.
Munhu mumwechete anonzi mufudzi (shepadhi) ndiJesu.
MAPISAREMA 23:1 JEHOVA ndiye mufudzi wangu; Hapana chandingashaiwa.
Mweya Mutsvene unotiita kuti titerere Magwaro chete.
MATEO 25:13 Naizvozvo rindai nokuti hamuzivi zuva kana nguva Mwanakomana womunhu raanovuya naro.
Tinofanira kurindira muMagwaro kuti tigonzwisisa zviitiko zvemunyika. Tinofanira kurindira muMagwaro kuti tigone kuona nekuziva kutadza kwemakereke edu.
Mweya Mutsvene unofanira kutitungamirira kuti tikunde kushaiwa hanya kwese kuri mumaKristu enguva yekupedzisira muShoko raMwari.
Mufananidzo unodakadza wakaparidzwa pamusoro pemunhu akagadzira chirairo. Izvi zvinomiririra mutambo wemuchato neGwaiana kudenga unonoitika mumashure meKuuya kwechipiri kwaJesu.
17 Akatuma muranda wake nenguva yokurayira kuti avudze vakanga vakakokerwa, kuti: Vuyai, nokuti zvose zvagadzirwa zvino!
MaKristu akaponeswa ndiwo anotanga kudanwa kuchirairo chemuchato. Mwari anoita seasingazodaidzi vaya vasina kuponeswa.
Asi Mwari anodana neBhaibheri rake. Haagamuchiri chero chinhu chiri kunze kweBhaibheri rake.
RUKA 14:18 Ipapo vose vakatanga nomoyo mumwe kuzvirevera. Wokutanga akati kwaari: Ndatenga munda, ndinofanira kumbondouvona; ndinokumbira kuti undireverere.
Asi hapana mumwechete wemaKristu akaponeswa anoda kudavira kudana kwaMwari. Mwari anotidaidza kupfurikidza Shoko rake. Asi isu tinosarudza kutevera zvinotaurwa nevatungamiri vemakereke edu netsika dzemakereke edu.
Bhaibheri harina kubvira ratiudza kuti tipemberere kuzvarwa kwaJesu asi isu tinosarudza kuriita zuva guru remhemberero dzemaKristu pagore rese. Tinoita zvinhu nenzira dzedu. Hakuna ane hanya nekuti Bhaibheri rinotii. Tinonzwa tichimanikidzwa kuti “Muve neKisimusi inofadza” kutaura kusimo zvachose muMagwaro.
RUKA 14:19 Mumwe akati Ndatenga nzombe dzamajoko mashanu, ndinoenda, kundodziidza; ndinokumbira kuti undireverere.
Ndakabatikana zvikuru nezvinhu zvangu zvepfuma yangu. Ndinofanira kutanga ndaita mari.
RUKA 14:20 Mumwe akati: Ndawana mukadzi, naizvozvo handingavuyi.
Mukadzi anomiririra kereke. Ndakaroorwa nekereke yangu ndinoita zvinotaurwa nekereke yangu . Ndinotenda kune zvinotaurwa nekereke yangu. Ndinobatira Mwari nenzira yandinonzi ndiite nekereke yangu. Ndizvo zvakakosha kudarika zvinotaurwa neBhaibheri. Ndakachengetedzeka chero ndiri mukereke mangu.
RUKA 14:21 Muranda akavuya, akavudza ishe wake izvozvo. Ipapo mwene weimba akatsamwa, akati kumuranda wake: Kurumidza, ubude kunzira huru neduku dzomumusha, uvuye pano navarombo, nezvirema, namapofu, navanokamhina.
Saka maKristu akaponeswa ari mukereke havazogari nezvinotaurwa neBhaibheri. Saka Mwari anozodana vese vakarambwa. Vaya vakaremara. Vaya vanganzi havana betsero kukereke.
RUKA 14:22 Muranda akati: Ishe, izvo zvamaraira, zvaitwa, asi nzvimbo ichipo.
Zvino Mwari anobva adana vanhu vakaipa, vakarambwa, vasina kufanira. Ava ndivo vanhu vasingakwani mukereke nekuti hwaro hwavo hwaive hwakaderera zvakanyanya. Ava ndivo vanhu vasingadiwi.
Chiratidzo chenguva. Vaparidzi vakati Trump aive asingazosarudzwi nekuti aive munhu akaipa. Vakapesana nechiratidzo chezuva ravo. Mwari akabva kuvanhu vakanaka mumakereke. Vakasungwa zvakanyanya nechichechi-chechi chavo. Izvozvi akudaidza nekushandisa vanhu vakaipa vakafanana naTrump nekuti vanozvipira kupikisa zvinofungwa nevazhinji. Rumutsiridzo rwakatangira kuEurope yekumadokero pasi pekubata kwaMartin Luther rukapararira kuEngland pasi paJohn Wesley. Sarudzo dzemuna Zvita 2017 dzeMubatanidzwa weNyika dzepasi rese (UN) dzakakundwa neruzhinji rwaisvika zana nemakumi maviri nesere ezvibodzwa zvaipikisa Israeri kuzvibodzwa zvipfumbamwe zvaiimiririra hupikisi hwakatsigirwa nenyika dzekumadokero dzakanakisa nemaKristu, kusanganisira Canada. Kurohwa chiso kwakadii kunaMwari uku. Vakasarudza Korani pachinzvimbo cheBhaibheri. Ichi chiraidzo chenguva chinotyisa kwazvo. Asi munhu akaipa asina nhorondo yakanaka muhupenyu hwake ndiye ega akawanikwa naMwari arinezvivindi zvekuzadzisa Kuda kwaMwari.
Apa ndipo panotyisa. MaKristu ese akanaka akaponeswa vakaramba kufamba nenzira inodiwa neBhaibheri vachibva varambwa naMwari. Vachaparara mumakereke avo munguva yeKutambudzika. Vachasangana nevakafa muna Kristu vozowonekwa mumashure memakore 1000 erugare.
Tsika dzekereke nezvakabatwa paitaura vanhu zvakazadza pfungwa dzemaKristu akaponeswa nezvitendero zvisiri muMagwaro.
MaKristu anotenda kuti zita raBaba nereMwanakomana neroMweya Mutsvene ndiro Zita raMwari.
Saka havana Zita raMwari wavo.
Vanobva vataura kuti Petro akakanganisa paakaudza maJuda kuti vabapatidzwe muZita raShe Jesu Kristu.
Saka kwavari vanobva vatobvarura vhesi iri kuribvisa muBhaibheri.
Vanobva vatadza kuona nekuziva kuti Jesu Kristu ndiro Zita raMwari.
Kuzara kwovuMwari kwese kuri Mweya kunogara muna Jesu. Saka Jesu ndiro zita raMwari remunhu.
Jesu ega ndiye akafa, akavigwa akamuka kubva kuvakafa.
Baba naMweya Mutsvene, kana vari Vanhu vaviri vakasiyana, havana kubvira vafa kana kuvigwa. Saka rubapatidzo runomiririra kufa, kuvigwa nekumuka kubva kuvakafa hakuna kubvira kwaitika kunaBaba naMweya mutsvene.
Makereke ava mapato “anotongwa nevanhu, kwete nemavhesi eBhaibheri.”
mavhesi eBhaibheri mazhinji anofuratirwa, uye zvitendero zvizhinji zvakakosha kana tichifanira kudzoserwa kunzira yakashandiswa nekereke yekutanga haisi kuteverwa. Kuva nesimba pakutonga hupfumi hwekereke zvakakonzeresa kuiswa kwesimba nepfuma pamunhu mumwechete anova pasita wekereke iyoyo.
Saka kutadza kukuru uku konoreva kuti vanhu vemumakereke nhasi havagoni kudavira kana vakadanwa nemuprofita wenguva yekupedzisira anotiudza kuti tinofanira kutevera Magwaro pane zvese zvatinotenda mazviri.
Chigadziko chemwenje minomwe muBhaibheri chiratidzo chemakore 2000 enhorondo yekereke yakapatsanurwa kuitwa nguva nomwe dzemakereke.
Kudzokera kwemaJuda kuIsraeri kunozadzisa zvakaprofitwa muTestamente Yekare. Saka vanomiririra chiratidzo chenguva yekupedzisira inotiyambira isu vaHedeni kuti tava munguva yekupedzisira yekereke, kereke yeRaodikia. “Raodikia” inoreva kuti “kodzero dzevanhu”. Nyaya “yekodzero” iyi inyaya huru munguva yekereke yekupedzisira.
“Kodzero dzevanhu” vanoita nezvadzo vanoronga kuratidzira, kutsvaga rutsigiro, nekugunun’una vari mumigwagwa dzimwe nguva mhirizhonga zvakazara pamisoro penyaya mumapepanhau kubva zvakatanga nguva yekereke yechinomwe muna 1906 nekudururwa kwePentekosita mumugwagwa weAzuza muLos Angeles kuAmerica.
Kodzero dzevashandi. Kodzero dzevanhukadzi. Kodzero dzengochani. Kodzero dzevashanyi. Kodzero dzeLGBT. Kodzero dzevanhu. Kodzero dzevagari venyika. Kodzero dzetsika. Kodzero dzekushanda kwevanhu vasina mapepa akakodzera. Kodzero dzesarudzo. Kodzero dzekudzidza. Nedzimwe dzakadaro.
Nguva yekereke yekupedzisira ine ruzivo rwetekinoroji rwakawandisa asiwo iri murima uye yakaipa kwazvo.
Chinangwa chikuru cherubapatidzo rweMweya Mutsvene nhasi ndechekuzodza meso edu nechizodzo kuti tigone kuwona zvakaipa zvese mumakereke, zvese mukereke yedu yatinoenda neevamwe. Totsvaga chokwadi chekutanga chaicho chakatendwa machiri nekereke yekutanga.
Asi chokwadi cheBhaibheri chekutanga ichi chinorambwa kwazvo nemakereke anhasi zvekuti vanovenga nekufuratira vanhu vanotaura nezvazvo. Kutevera chokwadi cheBhaibheri vhesi nevhesi hazvichaitwi nemakereke (nekuti havagoni kuzviita) saka zvinoita sekuti vari kufamba mumipata yemweya.
Kereke ndiyo inovhikirira kutadza zvakanyanya uye nekushaiwa kunyara kana kutya vanovhikirira tsika dzavo voparadza nekuramba chero hupikisi. Kuparadza hunhu hwemunhu kunogonesa vakuru vemakereke kushaisa simba chero vanouya vachipikisa. Iyi inzira inoshandiswa nevanoita zvematongerwo enyika. Saka bhiza dzvuku rezvematongerwo enyika nebhiza jena rehunyengeri hwechitendero anobatana mumakereke medu. Saka maKristu anhasi anoramba mavhesi emuBhaibheri anorwisa dzidziso dzavo dzisimo muMagwaro.
MATEO 24:9 Zvino vachakuisai kumadambudziko, vachakuvurayai, muchavengwa namarudzi ose nokuda kwezita rangu.
Edzai kutaura nyaya yerubapatidzo rwemvura muZita raJesu Kristu kana muchida kuona kurambwa kunotyisa kana kutovengwa.
MATEO 24:10 Vazhinji vachagumburwa vachaisana kuvatongi nokuvengana.
MaKristu haana rudo rwekutsvaga nekuziva Bhaibheri munzvimbo dzarinovarwisa uye dzarinoburitsa kusaziva kwavo Magwaro akayorwa. Vanoramba, vanodzivirira nekumhura vaya vanotaura pamusoro peMagwaro kana vachitaura pamusoro peimwe nyaya. Havagoni kutakura mutoro uyu kana mukange mawana chakaipa pamusoro pekereke yavo. Havagoniwo kurwira kereke yavo vachishandisa Magwaro.
MATEO 24:11 Vaporofita vazhinji venhema vachamuka vachitsausa vazhinji.
Masangano emakereke akasiyana-siyana anosvika 45000 ariko nhasi uno. Izvi zvinosiira vaparidzi venhema mukana mukuru kwazvo. Mapasita mangani akati Hillary aizokunda musarudzo dzemutungamiriri weAmerica? Uku kwaive kuprofita kwenhema.
MATEO 24:12 Rudo rwavazhinji ruchatonhora nokuti kusarurama kuchawanda.
Kusarurama kana kutadza mebwoni. Kuziva kuti chinhu chakaipa asi mongochiita zvakadaro. Kuparidza kubva pazvinhu zvakabatwa paitaura munhu pachinzvimbo chekuparidza Bhaibheri.
MATEO 24:13 Asi unotsungirira kusvikira pakuguma, uchaponeswa.
Zvinotora Mweya Mutsvene unenge uri mumunhu kuti apone mudutu rekuipa uye kuti agare achitevera Magwaro pazvinhu zvese. Hupikisi kuBhaibheri reKing James Vhezheni hwakurisa.
Zvakare, vhesi iri harina chekuita neruponeso kubva kugehena. Dambudziko iri rinogadziriswa patinotanga kugamuchira Jesu seMuponesi wedu. Asi tinofanira kuponeswa kubva kunguva yeKutambudzika kukuru nekuva takagadzirira Kuuya kwaShe. Kana akatisiya tinenge tava panjodzi. Saka tinoda Mweya Mutsvene kuitira kuti tishingirire kusvika pakupedzisira tichiramba tichitevera Magwaro zvisinei nehupikisi hwese hwatinotarisana nahwo hwakaitirwa kuti tisiye kutevera Magwaro nemazvo.
MATEO 24:14 Evhangeri iyi yovushe ichaparidzwa munyika dzose chive chapupu kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika.
Nedandemutande reintaneti Evangeri rakukwanisa kusvika pasi rese. Saka tava panguva yekupedzisira.
Asi hupikisi hwakaiswa nenzira dzese pane vanotevera Magwaro hunobva pavaKristu vakaponeswa vari mumakereke, izvi zvinoita kuti zviome kwazvo kuti tiwane chokwadi. Nezvitendero zvizhinji zvenhema zviri mumakereke, zvinoda kubatsirwa kukuru kunobva kuMweya Mutsvene kuti kuvhure meso enyu kuti muone chokwadi cheBhaibheri. Mweya Mutsvene chete ndiwo unogona kukupai simba rekukurira mutoro unorema wezvitendero zvemakereke zvinokubvisai paMagwaro.
Ngatitarisei muzviitiko zvenguva yedu ipapo munogona kuzoona kuti ndezvipi zvimiro zvehondo zvinofanira kurwiswa naMweya Mutsvene asati akuisai munzvimbo yenyu mumuviri waShe.
ZVAKAZARURWA 3:14 Nyorera mutumwa wekereke iri paRaodhikia, uti: Zvanzi naAmeni, chapupu chakatendeka, chazvokwadi, kutanga kwezvisikwa zvaMwari;
Tarirai kuti Mwari haana kunyorera kereke yake muguta reRaodikia. Kereke yaive yatorwa yava yeveRaodikia. Haisisiri kereke yaMwari, yava kereke yepaRaodikia. Vanoshumira nekubatira Mwari nenzira dzavo. Vanofunga kuti Mwari anofadzwa nekuedza kwavo uye nemazano avo.
Asi pane mupupuri wezvokwadi. Shoko raMwari. Bhaibheri nderechokwadi kubva kwekutanga kusvika Amen, zvinoreva kuti “ngazvive sekudaro” pakuguma. Bhaibheri harina kubvira rashanduka. Mwari anozivisa zvakavanzika zveMagwaro munguva yekereke yekupedzisira mukati mehushumiri hwemutumwa wechinomwe kana kuti nhume. Zaruriro idzi dzinozorwisa zvizhinji zvezvakaipa zvakatendwa mazviri nemakereke kwemasenturi mazhinji.
Chakakoshera Mwari chikuru kuzuva redu kutiita kuti tione nekuziva kuti Bhaibheri reKing James Vhezheni ndiro rekutanga rine chokwadi chikuru. Tinoda kunzwisisa zvakavanzika zvese zveBhaibheri zvinodiwa kugadzirira Mwenga waShe kuitira kudzoka kwaJesu.
Asi vepaRaodikia vanenge vasingatereri. Vakaputirwa kwazvo muhungwaru hwavo. Vakazadzwa nemazano avo akachenjera vanoda kwazvo kuturikirwa kwakachenjera kwezvakataruwa nevanhu uye zvinofungwa nevanhu netsika dzemakereke avo. Mazwi evatungamiri vekereke anoiswa pamusoro pezvinoreva Bhaibheri.
Tinotenda kune mamwe Magwaro anotaura pamusoro pekuponeswa. Saka, netsitsi, maKristu mazhinji anoponeswa. Asi mumashure maizvozvo tinenge takufadzwa kwazvo nekungoenda kukereke musangano rinotiitira. Zvino tinobva tatenda zvinotaurwa nekereke pachinzvimbo chekuedza kutsvaga zvatinotenda muMagwaro nekuti izvi zvinoita sekuti ibasa rakaoma kwazvo. Saka tinongotenda chero zvataparidzirwa. Kereke imwechete ingori imwechete kubva muzvitendero 45000 zvakasiyana-siyana zvechiKristu. Saka munenge munemukana mumwechete kubva pamikana 45000 wekuva munechokwadi. Saka munenge muchitamba kwazvo nemikana yenyu yekuzopunyuka kubva munguva yeKutambudzika.
Saka hatina kubva paMagwaro zvakazara. Kune mamwe mavhesi eBhaibheri atinotenda maari.
Asi panguva imwechete tinotenda zvinhu zvizhinji kunyange tisingagoni kuzowana vhesi reBhaibheri rimwe zvaro rinotaura izvozvo. Semuenzaniso Pontiff kana kuti Pope, Kadhinari, rozari, achibhishopu, rendi, maisita egi, maisita rabhitsi, muti weKisimusi, 25 Zvita, Mwari mumwe muVanhu vatatu, Munhu wechipiri muhuMwari, Tiriniti, masangano, Chitatu chemadota, modhareta nezvimwe zvakadaro.
Saka tiri musanganiswa wakaipa wekutenda chidimbu kuBhaibheri uye chidimbu chekutenda dzidziso dzakaitwa nevanhu.
Tiri nguva yemagwara paMweya. Tinotenda Bhaibheri mune dzimwe nzvimbo totenda tsika dzemakereke mune dzimwe nzvimbo. Hatigoni kupikisa tsika dzemakereke nekuti ipapo tinenge tisisina mbiri. Saka tiri chikamu Magwaro kuti tiponeswe, zvakakosha. Asi mumashure mezvo tinodududza topinda mumifungo yevanhu yakawandisa ine nzira dzekubapatidza dzinoda kusvika gumi neina dzekusarudza kubva kwadziri. Nenzira iyoyo tinochengetedza mifungo yevamwe vanhu. Tinotya kwazvo kupokana napasita pachinzvimbo chekupokana naMwari. Tinotya kudzingwa mumakereke edu nekuti tinopokana nezvimwe zvinhu imomo.
Uku kutukwa kwakadzama kwekereke yanhasi. Asi hatisi kuterera kuti titende kuti ari kutaura nesu. Tinoti ari kutaura nemamwe makereke, kwete kereke yangu. Asi haana kusarudza saka ari kutsanangura isu tese. Ndangariro dzaMwari pachiKristu chanhasi ndedzekuti tinomunyangadza.
Izwi rekutanga rinotaurwa nevanhu muRaodikia kana vakapihwa mukana wekutaura nderekuti “Ndini”. Iyi ndiyo nzira Mwari yaakazvizivisa nayo kuna Mosesi. Saka vanhu neruzivo rwavo vakatsiva Mwari neBhaibheri rake.
EKSODO 3:14 Mwari akati kuna Mozisi, "NDICHAVA IYE WANDICHAVA”
Mosesi muhuvepo hwaMwari haana kubvira ataura kuti “Ndini ndiri pano” akataura achibva nekumashure akati “ndiri pano hangu” haana kuti “ndini ndiri pano”
Saka kuvaRaodikia vanotaura kuti “ndini ndiri pano” zvinoreva kuti havasisiri pahuvepo hwaMwari. Zvinoratidza kuti Jesu haasisiri mukereke.
Tarirai Tiriniti yemazuva ano: Ini, ndini neni.
Mafoni edu emazuva ano ari kushandiswa kuzvitora “maserufi”. Chirwere cherudo rukuru rwekutora maserufi mazuva ano rwauraya chiKristu munyika dzemuErope zhinji. Izvi zvakatanga mumakore ekunopera kwana 1950 nemumhanzi wemadhindindi apo Elvis Presley akazarura mukova wekukakavara kwevana vechidiki. Kuchibva kwauya makore ana 1960 nemumhazi weBeatles wakazarura mukova kune zvinodhaka, uyezve mutungamiri weBeatles Jonh Lennon akataura zvaisina musoro zvekuti veBeatles vaive nembiri kudarika Jesu. Ipapo mumwe wevaimutsigira akabva amupfura nepfuti akafa. Muna 1963 kwakabva kwauya marokwe mapfupi nemapiritsi ekudzivirira kubata mimba zvichibva zvazarura mukova wekusakwana pane zvekusangana pabonde. Wanano dzakabva dzasendekwa parutivi.Vakadzi vakatanga kupfeka mabhurukwa muna 1963 sechiratidzo chesimba ravo pamusoro pevarume vavo. Mumakore a1960 makaberekwa makore ainodaidzwa kuti Hippy cult decadence setsika yakatsiva izvi zvose yakavapo kusvikira zvinodhaka netsvina yaiputika yemasuweji zvakaparadza kuita kwavo paWoodstork muna 1969 apo hafu yemiriyoni revanhu rakaunganira mutambo weRock waive nerunyarara (zvaive zvakanakaw0 asi hakuna akanga afunga kutsvaga nekugadzirisa zvimbuzi (zvaive zvakaipa kwazvo uye zvine njodzi yezvirwere, kunyanya pakwaizotanga kunaya). Kusangana kwezviitiko izvi nekuedza kuzviparadza kweAmerica musango reVietnam. Satani aiedza kuita sei?
Muna 1963 William Branham akazivisa zvakavanzika zveZvisimbiso zvitanhatu muBhuku raZvakazarurwa zvakazarura mukova wekunzwisisa kwakadzama kwezvakanyorwa muBhaibheri. Chisimbiso chechinomwe chakaziviswa sechakavanzika chikuru chatisina chatinoziva nezvacho sezvo kuri Kuuya kwaShe chinova chakavanzika chikuru pasi rese. Satani akadavira netiriniti yake yemakore ana 1960 emimhanzi yemadhindindi, zvepabonde uye zvinodhaka. Zvese izvi zvinoisa kukosha pamunhu akazvimiririra pachake.
Kuzivisa Chisimbiso chechinomwe kungadai kwakatiita kuti tinyanye kutevera Magwaro asi mapasita eMharidzo akava nerudo kwazvo nekungwara kwavo vakatanga kuti vanonzwisisa zvakavanzika zveShoko zvisina kunyorwa muBhaibheri zvakafanana neKutinhira kunomwe, Chisimbiso chechinomwe, uye Zita idzva raJesu. Pasita wemharidzo mumwe nemumwe ave kuzvikoshesa zvakanyanya zvekuti ave kuzviita musoro wekereke. Uku kutevedzera zvakazara kuita kwekereke yeRoman Catholic. Vanasikana makereke emasangano vari kudzidza kubva kuna mai vavo kereke yeRoman Catholic. Jesu, Musoro wekereke wechokwadi, akasairirwa kunze kwekereke. Saka mazwi akabatwa paitaura vanhu nekuturikirwa kwawo zvava kutonga mukati memakereke emharidzo. Kana muchida kutsvaga zvese zvamunotenda kubva kuna Genesisi kusvika kuna Zvakazarurwa kupfurikidza mavhesi eBhaibheri munokwaisa kungowana nzvimbo kunze kwekereke chete.
Kuzvikoshesa kunobereka mweya wekuzvikudza apo kereke imwe neimwe inotenda kuti ivo vega ndivo vanonatsa uye vamwe vese vanovapikisa havana chavanoziva. Kereke yangu inogona. Mamwe makereke ese 44 999 akasiyana anotadza. Ndiko kufunga kwevazhinji mazuva ano. ChiKristu chemakwikwi chinoita kuti kereke imwe neimwe itende kuti ivo vega vari nani kudarika vamwe vese.
“Kupfuma”. Uyu ndiwo mucherechedzo webudiriro mumakereke anhasi. ChiKristu chekutenga nekutengeserana chinokumbira zvinhu zvakawandisa kuna Mwari kuti ape vanhu uye makaro avo emakwikwi. Zvinoshandura vanhu kuvaita vanhu vemanyepo uye maKristu asinehanya. Kuda kwedu zvinhu zvakanyanya kune mubairo wekuwana zvirwere zvekufunganya uye kusagutsikana. Tine zvizhinji kwazvo asi hatigumi kunyunyuta nekutsutsumwa. ChiKristu chava chekutsvaga kutandara apo kuenda kwedu kukereke Svondo yega yega, kwatinotenderana nezvese zvinenge zvichiparidzwa nemusoro wekereke akasimudzirwa pamusoro pevamwe, kunonzi “kunochengeta” nzvimbo yedu yekukwira kudenga “mukubwaira kweziso”. Uye kubhadhara mari yechegumi nguva dzese inonzi ndeyapasita. (Edzai kutsvaga kutaura uku, “chegumi ndechapasita” muTestamente Itsva).
Chinokumbirwa naMwari kuvanhu chikuru ndechekuti ngavatevere Magwaro nguva dzese. Izvi hazvisisina nzvimbo mumakereke anhasi nekuti vatungamiri vemakereke havachagoni kutsanangura Magwaro mazhinji ivo pachavo saka vanongofuratira nyaya idzi dzese.
“havadi chiro; asi vasingazivi”. Havadi chiro. Havadi kugadziriswa. Kereke yangu ndiyo iri padyo naMwari zvakanyanya uye hakuna munhu anobva kunze kwekereke yangu anogona kutigadzirisa kana kutiudza pamusoro pechimwe chinhu chatisinganzwisisi. Kereke yangu ine zvese. Tine zvese zvatinoda. Munokwanisa kubatana nesu kana muchitenda mune zvese zvatinotenda mazviri. Kana muchida kupokana, kana kuti muchida kuti dzidziso dzedu dzese dzitsigirwe neBhaibheri ndapota garirai henyu kure. Hatikudei.
“musingazivi”. Kereke haisi kuzivawo kuti kune Mumwe akamira kunze kwemukova wekereke.
Anogogodza asi haasi kuzarurirwa kuti apinde. Mazwi akabatwa paitaura vanhu ndiwo anogamuchirwa, kwete Magwaro.
Chinhu chikuru chiri pakereke yeRaodikia ndechekuti kana munhu akaponeswa akada kudzidza zvakawanda pamusoro paJesu anogona chete kuzviita kana adzingirwa kunze kwekereke.
“musingazivi” zvinoreva kuti kereke hainzwisisi kufunga kwaMwari. Chinangwa chake chikuru kunguva yedu hachisi pahutano nebudiriro yedu (zvakakosha asi hazvisi zvinhu zvaakatarisana nazvo). Mwari anoda kuti titevere Magwaro zvakazara muzvikamu zvekunzwisisa zvinhu zvakanyorwa muBhaibheri, izvozvi sezvo Zvisimbiso zvakaziviswa. Kereke haioni izvi. Vanofunga kuti mari, vanhu vazhinji, uye dzidziso dzevanhu dzakangwara uye kuungana kune mbiri nemimhanzi yemadhisiko ndiyo nzira yebudiriro.
“musingazivi kuti ndimi munevurombo, mune nhamo, muri mapofu, uye makashama:”
Zvisinei nepfuma yedu nebudiriro mukuzviunganidzira zvinhu tiri varombo pamweya nezvitendero zvedu zvakaipa zvatinotenda mazwi akataurwa nevanhu zvatinotyora tichibva paShoko rakanyorwa. Kusaziva Bhaibheri ndiyo kiyi yevurombo hwemweya.
Nyika yedu yanhasi inovimba kwazvo nemapiritsi ekudzinga kufunganya uye marwadzo anoshandiswa pakutsvaga “mufaro” wenhema kuti vanhu vabve pakufunganya. Chero vanhu vazhinji vane mbiri vanotarisana nekufunganya kukuru uye vanotarisana nenguva zhinji dzakaoma. Kuzviuraya ndicho chinhu chiri kunetsa zvakanyanya muUnited States inova nyika yakapfumisisa pasi rese, apo vanhu vanozadzwa nekushungurudzika muzviitiko zvinovawira.
“hamuna chekufuka” kutukwa kwevanhukadzi nemapfekero avo apo vanoratidzira miviri yavo vasina nyadzi.
“mapofu” zvinoreva kuti vanhu havakwanisi kuona zvinorehwa nemavhesi eBhaibheri.
Nei Jesu akanyora nemunwe wake kaviri muvhu? Mhinduro yemaKristu inouya ichiti, zvine basa rei? Hazvina kukosha. Hazvina maturo. Hazvikanganisi kupona kwangu.
Mhinduro idzi dzese dzinongoreva kuti munhu uyu haazivi uye haadi kuziva. Kana tikatarisa Magwaro tikatadza kuziva zvaanoreva tinenge tiri mapofu. Asi hatifungi kuti tiri mapofu zvisinei nekusaziva kwedu Magwaro kwakakura kwazvo. Saka tinorarama muparadhiso remarema nekunyengerana kwedu kwekuzvikoshesa kunotigonesa kufuratira kusaziva kwedu Magwaro.
Mateo 15:14 Varegei mapofu anotungamirira mapofu. Zvino kana bofu richitungamiraira bofu achawira mugomba ose ari maviri.
Kana vaparidzi mapofu vasingazivi kuti Rugwaro runorevei, vakatungamirira vanhu mapofu vanovimba maari, gomba rakavamirira mberi kwavo ndiyo nguva yekutambudzika kukuru.
MaKristu anotaura kuti Eva akadya muchero unobereka mumuti. Asi michero yese yakanzi yakanaka paZuva retatu. Jesu akataura kuti hapana chatinodya chingatisvibisa.
Mateo 15:11 Izvo zvinopinda mumuromo, hazvisvibisi munhu asi zvinobuda mumuromo ndizvo zvinosvibisa munhu.
Saka makereke anotirasisa. Vanoti Mwari akangoita kamutemo kekuda kuona kutendeka kwedu nekutaura kuti tisadye muchero. Kamutemo aka pakakatadza kuteverwa Mwari akabva asunungura kuipa kukuru kwerufu nezvivi panyika. Mwari haana kubvira avaudza kuti vatendeuke. Chokwadi kutadza kuduku kwakadaro kwaikwanisa kutendeukwa kubva kwakuri, dai Mwari akavaudza kuti vatendeuke.
Chiitiko ichi chese chinobva chadzima kukosha kweBhaibheri nekuti chinoratidza kuti Mwari aripo kutsvaga zvakaipa zvevanhu zviduku-duku. Asi pamusoro pazvose Mwari akavaudza kuti muchero wese waive wakanakira kudya.
Saka nei kuine kutambudzika kwese uku uye rufu kubva pakudya muchero wemuapura usina chakaipa chaunoita pamunhu?
Genesisi 2:9 JEHOVA Mwari akameresa pasi miti yose inofadza meso, neyakanaka kudya; uye muti woupenyu pakati pomunda, nomuti wokuziva zva­kanaka nezvakaipa.
Muti wehupenyu waizopa hupenyu husingagumi.
Genesisi 3:22 Zvino JEHOVA Mwari akati, "Ta­rirai, munhu ava somumwe wedu zvaanoziva zvakanaka nezvakaipa; zvino zvi­mwe angatambanudza ruoko rwake aka­torawo zvomuti woupenyu, akadya, aka­rarama nokusingaperi."
Asi Jesu ega ndiye anopa hupenyu husingagumi.
Johane 3:14 Mosesi sezvaakasimudza nyoka murenje, saizvozvo Mwanakomana womunhu unofanira kusimudzwa vo,
15 kuti aninani unotenda kwaari, arege kuparara ave novupenyu bwusingaperi.
1 Johane 5:11 Kupupura ndiko, kuti Mwari wakatipa vupenyu bwusingaperi; zvino vupenyu ubwu bwuri muMwanakomana wake.
Saka Muti wehupenyu waive usiri mumwe muti asi Mweya waJesu Kristu. Muti wehupenyu waive usiri muti unomera wokura.
Eva akaudzwa kuti abereke azadze nyika kuna Genesisi Chitsauko 1. asi muChitsauko 3 Mwari semurango akamuudza kuti aizowedzera kubata mimba kwake.
Genesisi 1:27 Mwari akasika munhu nomufananidzo waMwari; akavasika murume nomukadzi.
28 Mwari akavaropafadza, Mwari akati kwavari: Berekai, muwande, muzadze nyika, ...
Asi muChitsauko 3, Mwari semurango akataura kuti aizowedzera kutora mimba kwake.
Genesisi 3:16 Kumukadzi akati, "Ndichawanza zvikuru kurwadziwa kwako nokutora mi­mba kwako, uchabereka vana uchirwa­dziwa; kuda kwako kuchava kumurume wako, iye achava ishe wako."
Izvi zvinoyanana papi? Kana akadya apura nei ari kurangwa nekuzvara?
Kana Mwari akamusika akamuti abereke, nei kuwedzera kutora mimba kwake kwaive murango?
Saka kereke inotirasisa. Havana gwara reruzivo rwekuti chivi chekutanga chaive chei. Uye vanoda kuti tigare tiri pahwaro hwavo hwehupofu.
Nei vachitya kwazvo kutsvaga nekuziva kuti chivi chekutanga chaive chii? Nekusaona kuti chivi chekutanga chaive chii, vatungamiri vemakereke vanoramba vari mapofu. Uye vanofara kugara vakadaro. Vanhuwo vanofara kuti varambe vachivatungamirira.
Ndicho chikonzero nei tichida rubapatidzo rweMweya Mutsvene. Tinoda Mumwe Munhu anogona kuzarura meso edu kuti tione Shoko raMwari riri kuziviswa kuzuva redu.
Zvakazarurwa 3:18 Ndinokupa zano kuti utenge kwandiri ndarama yakaidzwa mumoto, kuti uve nefuma, nenguvo chena, kuti uzvifukidze, nyadzi dzokusafuka kwako dzirege kuvonekwa; nechizoro chameso, kuti uzore meso ako, uvone.
Ndarama yakaedzwa mumoto. Kutadza nekuipa zvinofanira kupiswa kuti zvibve matiri kupfurikidza kuomerwa nekurovererwa. Tinofanira kurovererwa nezvinotiwira nehupikisi hwechokwadi hunorarama mukereke.
Zvakazarurwa 3:18 kuti uzvifukidze, nyadzi dzokusafuka kwako dzirege kuvonekwa;
Hwaro hwemapfekero hwakaderera kwazvo. Vakadzi vanoratidzira nhengo dzemiviri yavo zvakanyanya mazuva ano. Jesu akasangana nemurume aive akashama aive akazadzwa nemadhimoni. Pakanga pabuda madhimoni maari akabva azvifukidza kana kupfeka.
Marko 5:15 Vakavuya kuna Jesu vakavona wakanga ane mweya yakaipa agere, akapfeka ari munhu kwaye, iye waiva neRegioni vakatya.
Saka mweya upi uri kuzadza vakadzi vechiKristu vanoshambadza nhengo dzemiviri yavo paruzhinji?
Mamwe emadhimoni akasimba kwazvo mukereke ndeaya anobvisa vakadzi nhumbi dzavo. Vaparidzi vanotya kupikisana nemweya iyi. Zvimwechete nevarume vavo nemadzibaba avo.
Kuenda kukereke tichiona vakadzi vechiKristu vachiratidzira mazamu avo nemabhechu nembatya dzisina mavoko zvinoratidza kuti chiprofita ichi chakataura chokwadi chikuru kwazvo pamusoro penguva yekereke yedu.
Kuzodza kweMweya Mutsvene munguva yedu kunokoshesa kuzodzwa pameso kuti tione zvakanyorwa muBhaibheri. Bhaibheri rega ndiro richatitungamirira kuti tisvike paKuuya kwechipiri kwaJesu kuti tipesane nenguva yeKutambudzika.
Zvakazarurwa 3:18 Nechizoro chameso, kuti uzore meso ako, uvone.
Tinofanira kugona kuona kuti Bhaibheri reKing James Vhezheni ndiro Mukuru uye rinofanira kutererwa uye kukosheswa muzvinhu zvose. Hakuna zvinotaurwa kana zvakataurwa nemunhu zvinogona kurwisa kana kutsiva Magwaro.
Zvakazarurwa 3:19 Vose vandinoda ndinovaranga nokuvarova; naizvozvo shingaira utendevuke.
Nguva yedu yakadarika kare mukutadza zvekuti chero vatendi vechokwadi chaivo vanofanira kurovererwa kuti zvakaipa zvese zvibude mavari. Hazvina kukwana kuti tingotendeuka chete. Tinofanira kushingaira kana tasvika panyaya dzekutendeuka. Zvinoreva kuti tiri kukanganisa zvakanyanya uye tiri kutenda zvakawanda zvakaipa.
Mweya Mutsvene unotiita kuti tive neshungu dzekudzidza Bhaibheri nekuti tinoona kuti tine zvakawanda zvatiri kukanganisa mukutenda kwedu. Nekutsvaga nekupima zvatinotenda neBhaibheri chete ndipo patinokwanisa kubvisa zvakaipa zvose. Asi maKristu havadi kudzidziswa kuti vangazviita sei nekuti vakazvisimbisa kuti chavanofanira kuita chete kutenda zvinodzidziswa mumakereke avo. Havazvifungiri kuti kereke yavo inogona kuva ichitadza.
Jesu ari kunze kwekereke. Izwi rake iShoko rake. Hakuna kereke inoda kubvumirana neizvi. Kereke dzanhasi dzine vanhu vakaponeswa madziri asi dzakabva paMagwaro mazhinji zvekuti maKristu akaponeswa aya akananga kunguva yeKutambudzika. Hakuna kereke inoda kubvumirana neizvi zvakare.
Pasita ndiye musoro wekereke. Ndeupi muviri unogona kuita misoro miviri? Hapana. Saka Musoro wechokwadi, Jesu, akamira achirambwa ari kunze kwekereke. Jesu ndiye Shoko, saka hakuna kereke ichiri kugona kutsigira dzidziso kana zvainotenda nekuzvipima neBhaibheri kubva kuna Genesisi kusvika kuna Zvakazarurwa. Vanofuratira zviri nyore mavhesi anorwisana nezvavanotenda mazviri. Vanotaura nemufaro kuti mune zvakakanganiswa pakunyorwa kweBhaibheri uye mune kurwisana pamavhesi eBhaibheri. Vanotenda kuti kereke yeTestamente Itsva yakadarika uye kuti nguva yedu ino ine chiedza chiri nani uye chitsva.
Asi chikuru chevhesi iri ndechekuti Jesu ari kunangana nemunhu mumwe nemumwe mukereke, kwete nekereke yese. Saka zvisinei nekuti uri mukereke ipi, Mwari anotarisira kuti uterere zvinotaurwa neBhaibheri kwete zvinotaurwa nekereke yako. Mwari anotarisira kuti mutende chokwadi kunyange pasina mumwe mukereke menyu anotenda chokwadi ichocho. Mwari anotarisira kuti murambe zvakaipa zvekereke yenyu kunyange vamwe vese mukereke vasingaoni kuti vari kutadza.
Jesu ari kuda ruwadzano rwake nemunhu mumwe nemumwe. Haasi kudana boka. Saka Mweya Mutsvene chete ndiwo unogona kukuitai kuti mumire mega nechokwadi pakati pemakereke ane mbiri nekutadza kwawo.
Zvakazarurwa 3:21 Unokunda ndichamupa chinhu ichi, kuti agare neni pachigaro changu chovushe, seni vo ndakakunda, ndikagara pamwe chete nababa vangu pachigaro chavo chovushe.
Chinhu chikuru chatinofanira kukurira kutadza kutevera Magwaro kwemakereke uye tsika dzawo dzisimo muMagwaro. Zvino kune hukasha hwevanotenda kukereke vasingagoni kuremekedza chero munhu anopikisana navo.
Tinoda rubapatidzo rweMweya Mutsvene kuti tigone kuona chokwadi cheBhaibheri uye kuti tive nezvivindi zvekumisidzana nehupikisi hwemakereke. Ino ndiyo nguva ine hunyengeri hukuru hutori mukati mekereke pachayo.
Kana zvamunotenda zvisirizvo, kunamata kwenyu kunamata pasina.
Ndiyani anodzidzisa dzidziso dzevanhu? Vatungamiri vemakereke.
58-0326 Takabatana pasi peMusoro Mumwechete
Munoziva here kuti Jesu ari kuuya akatasva bhiza jena? Tarirai kuti zvinotaridzika sechokwadi zvakadii, kuti kereke nezvitendero zvayo nemasangano ayo, zvinooneka sechokwadi zvakadii, sechinhu chechokwadi chaicho? Bhaibheri rinoti munguva yekereke yekupedzisira mweya miviri ichave yakada kufanana zvakanyanya zvekuti inogona kunyengera chero vakasanangurwa chaivo kana zvichibvira.
Haisi komiyunizimu. Chichechi. Ndizvo chaizvo. Ndiyo munyengeri.
58-1130 Varindi veHusiku Vei
Pandaive ndakavatarira vachigadira ngoma dzavo, ndikafunga, “Oh, takamira pamusoro-soro kwazvo parusvingo pamusoro pezvinhu zvese panyika. Takatarisira zvinhu zviviri zvikuru: kupera kwenguva uye kuuya kwaShe”. Nekukasika nguva haizovipo zve. Nguva haizovipo, uye kuuya kwaShe.
Antikristu, ane vanhu vake vachigadzirira pakadaro apo. Anenge ane komiyunizimu; ane “maizimu” akasiyana siyana. Ane chechiizimu; ane Catholicizimu; ane purotesitentizimu (yevanopikisa chiCatholic). Anenge ane zvese zvinodiwa kuti kuitwe mutambo mukuru.
Tarirai kuti ngoma nemimhanzi yemadhidhindi zvakapinda sei mukereke kuti zviite mutambo unodakadza. Kufadza vanhu kune mbiri.
Hazvishamisi kuti nei Jesu akavatuka nekuti havana kutenda zvakataurwa naJohane. Aive chiedza, nekuti vaprofita vakataura kuti aizouya. Uyo aive auya, chiedza chichiratidzwa. Havana kuchiona. Havana kuchinzwisisa; vakafungira kuti aive Messiasi, vakafunga zvimwewo zvinhu, neizvi. Vakatadza kuzviona.
Jesu akauya. Zviedza zviviri hazvigoni kupenya nguva imwechete.
Hakugoni kuita chiedza chekereke uye Chiedza chaMwari zvopenya nguva imwechete. Chiedza chaMwari chinofanira kudzima chiedza chekereke. Ndizvo chaizvo zviri kuitika nhasi. Mwari ari kupatsanura chechinizimu kubva muchiedza chake cheShoko rakavimbiswa kunguva ino yatiri kurarama. Ndicho chokwadi, shamwari. Munogona kusada kutenda izvozvo, asi munogona kumiririra kuti muzive kuti ndizvo here kana kuti kwete. Musamirire, munokwanisa kutopinda izvozvi muchiri nemukana.
Chiedza chaJohane Mubapatidzi chakadzima pakasvika Jesu. Chiedza chaMwari iBhaibheri Shoko rake. Chechinizimu inovakwa pamusoro pemazwi akabatwa paitaura vanhu. Mazwi akataurwa nevanhu akauya kuzozivisa zvakavanzika zveShoko. Izvozvi tinofanira kutenda kudzidziso kana taiverenga kubva muBhaibheri. Hatitende dzidziso nekuti zvakataurwa zvinodaro. Tinofanira kuwana Magwaro anotaura zvimwechete nezvakabatwa paitaura vanhu. Mumuromo mevapupuri vaviri.
65-0206 Mikova mumukova.
Pane chinhu chisina kuita zvakanaka pamwe panhu. Kupiringishwa hwezvinhu zvakataurwa. Simba rekumuka kwaJesu Kristu, sezvaakaita kumunhu ainzi “Rigioni” akazoonekwa apfeka ava munhu kwaye mupfungwa. Ndakatanga kutenda kuti mweya unogara pavanhu unovaita kuti vapinde muhunhu hwechiAmerica nechi French, nendudzi dzese dzezvemunyika nezvemakereke. Asi varegei vauye kunaShe kamwechete, vonzwa kugogodza ikoko pamukova, vachapfeka nguvo dzavo voita sevanhurume kana vanhukadzi, vova maKristu akazvarwa patsva. Amen. Hongu.
Vazhinji venyu vanofunga kuti, “Ndakawana rubapatidzo rweMweya Mutsvene, ndiri kuenda kuDenga.” hazvirevi chinhu chimwechete chekuti uri kuenda kuDenga, kwete, baba. Munogona kuwana rubapatidzo rweMweya Mutsvene awa rega rega muhupenyu hwenyu, asi makarasika muchizoenda kugehena.
Mweya Mutsvene unogona chete kudiridzira mbeu iri mumoyo kana kuti mumweya wemukati. Kana mbeu yakaipa iri mumoyo, Mweya Mutsvene unogona chete kuita kuti mbeu iyoyo ikure . Haushanduri mbeu yacho.
Saka tinofanira kugamuchira mbeu yeShoko raMwari mumoyo yedu seMukuru wedu. Ipapo Mweya Mutsvene unozoita kuti mbeu iyoyo ikure.
65-1128M Nzvimbo Imwechete Yatakapiwa Yekunamatira.
Uko kuTucson vari kuteerera mangwanani ano, ndakambozvibvunza.. .. ndinogara ndichimanikidza vanhu, “Endai kukereke, zvisinei nekuti maenda kupi.” ndoona vanhu ava vachiita sevanodzokera shure, vachienda neimwe nzira. Ndofunga kuti “Chii chaicho chiri kumboitika?”
Ndakaenda kune vamwe vavo, ‘Zuva rekutanga ramunenge muripo, vanouya kwauri, ‘Huyai kukereke yedu.’ kana mukasaita saizvozvo, hakuna anokugamuchirai.” mazviona? Mazviona? Chinhu chekumanikidzirana, zvinomanikidzirwa pamuri, mazviona, ndiyo Babironi. Asi Kristu, maari munouya nekusarudzwa; kwete nekumanikidzwa, moyo wenyu ndiwo unokudanai kwaari.
Mwari haana kuisa Zita rake paBabironi nguva iyoyo. Kunyangwe izvozvi. Haangaisi Zita rake paBabironi, kereke. Oh, vano, vanoisa Zita rake imomo, asi Iye haamo. Bodo.